ကျိန်သစ်ကိုရှေ့နေများ၏ရှေ့မှောက်၌အရန္ကုန္အေေယာင္ေ။ ဖြစ်လာတဲ့ရှေ့နေကိုချိုးဖျက်ဖို့ခက်ခဲသည်သို့(၂၀ ပျမ်းမျှအမျိုးသားရေးပျမ်းမျှဖြတ်သန်းဘားတွင်စာမေးပွဲ)၊ခက်ခဲ-(လွန်းမြင့်မားစံချိန်စံညွှန်းမှကြွလာသောအခါတာဝန်နှစ်ခုစလုံးအတွက်)နှင့်ခက်ခဲအောင်မြင်(ပိုရှေ့နေမပါဘဲဝင်ငွေထက်ရှေ့နေ)။ ဒီကြားနီးပါးအထောင်ပေါင်းများစွာလည်းကလေးများအ - အဆိုပါဥပေဒ။ သက်သေခံမိဘ၊မိသားစု၊သူငယ်ချင်းတွေ၊နှင့်ဥပဒေကျောင်းဌာနမှူးမှကျိန်စောင့်ရှောက်ရန်တာဝန်အဖြစ်နှင့်တူရိယာ၏တရားမျှတမှုအားလုံးအတွက်။ ခံစားခဲ့ရသူတို့၏ကြည်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုနားဆင်နေစဉ်အကြံဥာဏ်၏တရားမျှတမှုအားလုံးအတွက်အခြေအနေကိုရပ်နေမည်အားဖြင့်ကျိန်ဆို။ သူဖြစ်ရပြီမြတ်စွာဘုရားနှင့်အတူပညာရေးနှင့်ပညာ၊သူလည်းတစ်ဦးတာဝန်ကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းများအတွက်အသုံးပြုရန်ကောင်းသောအများစု၏။ အမွတ္ချိုသစ်ချ၊ထိုသို့သည့်အခါရောင်ရမ်းအတွက်စိတ်နှလုံးအစေခံရန်ဆန္ဒရှိ။ အကောင်းနှင့်သိသိသာသာတိုးမြှင့်အရေအတွက်ကိုနားလည်သဘောပေါက်အရေးကြီးသောကိစ္စရပ်များအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်းအနှောက်အယှက်ပြီးအခု။ သည်နှင့်အညီအကျွန်ုပ်၏လေးစားအတွဲတရားအန်ဒို ၊ရှေ့နေတစ်ဦးခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ခြင်း။ နှင့်မျှော်လင့်သူတို့အတွက်ကူညီလှုံ့၏အယူအဆအဖွဲ့အစည်း၊ခမြင့်တက်၊ကလေးခေါင်းနှင့်အခြားသူများအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်သူငတ်။ ငါလိုနေတတ်သူတို့မျက်စိနဲ့တစ်စင်ကြယ်သောသြတ္တပ္ပ။ ဂုဏ်မှဥပဒေကျောင်းမှဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အရည်အချင်းဘွဲ့။ သူတို့ရဲ့ဌာနမှူးနှင့်ဆရာဆရာမအ ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့် သုံးစွဲအချိန်ကိုရောက်ဖို့ဤအချက်။ အထူးဖော်ပြထားမှပညာရှင်များ၏မြို့ ကောလိပ်ဥပဒေကပျက် ၆ မြင့်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတွက်အနီဖြစ်၏။
အေမရိတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူ့အခွင့်အရေးရှေ့နေနှင့်အရေးကော်မရှင်လူ့အခွင့်အကိုင်မည်အစွပ်အတွက်တာဝန်ရှိသေဆုံး။ သူတို့တွင်ပစ္စုပ္ပန်မှာအစည်းအဝေးကြီးဟောင်းဒုတိယသမ္မတများဆုံးသဘာဝ။ လက်နက်ကင်းလှည့်၊ဟင် - သည်။ ရုပ်သံကင်းလှည့်၊ကြာသပတေးနေ့၊သြဂုတ်လ ၁၁၊၂၀၁၆ ဒဏ်ရာရစစ်သားတစ်ဦးတိုက်ပွဲတွင်စစ်တပ်နှင့်ပြည်သူ့စစ်တပ်အတွက်မြို့ ၊ ဒီစနေနေ့နံနက်။
မတွေ့ဆုံအား၏လျှော့ချတစ်ဦးအနိမ့်ဆုံးအသက်အရွယ်ရာဇဝတ်မှုပေးရန်တာဝန်အတွက်ပြဿနာများ၏အသုံးဝင္အေသားသမီးအတွက်၊တစ်ဦးကပြောပါတယ်။ ရာထူးအထက်လွှတ်တော်မှဥပဒေကြမ်းအကြောင်းရှာကြံအောက်ခြေမှာဆယ်နှစ်ကြာအသက်အရွယ်၏အနှောင်အသားလုပ်နိုင်ခဲ့ကြရာဇဝတ်မှုကနေတဆယ်ငါးနှစ်အသက်ပါရှိသောအတွက်လက်ရှိလူငယ်တရားွင့္လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ၏၂၀၀၆။ င့္မတ္ျနိုင်ငံတော်သမ္မတမၾ ၊သူအထက်လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်း ၂၀၂၆၊အများအပြားဂိုဏ်းအပေါ့ဆမှုအတွက်လူငယ်တရားင့္လူမႈဖူလံုေလုပ်ရပ်ကြောင့်အသုံးပြုမှုသူတို့ကလေးတွေအမူအကျင့်ကိုျပစ္မႈ။ ဒါပေမယ့်အဘို့သူရှေ့နေသည်နိုစာက်ာ္ခဲပေမယ့်နေဆဲအသက်အောက်တွင်ပြစ်မှုဆိုင်ရာတာဝန်အဖြစ်ဆက်ရုံအဂိုဏ်း အသုံးပြုရန်အတွက်။။။။။ 'အတွက်အနိမ့်ဆုံးအသက်အရွယ်၏ပြစ်မှုဆိုင်ရာတာဝန်သည်'ဝတ္စံုကိုးတကျိပ်နှစ်ပါးနှစ်အရွယ်မှာထိုအချိန်ကအသုံးပြုခဲ့သောအဂိုဏ်းဖြစ်ပါသည်'သင့်ရဲ့ကိုး ၁၂။ ဒါကြောင့်မို့လို့'ချရန်သင်သည်'သင်၏နိမ့်ဆုံးအသက်အရွယ်၏ပြစ်မှုဆိုင်ရာတာဝန်၊အထင်၏ဂိုဏ်း၊'ငယ်'သင့်ရဲ့သုံး၊ေစာက်ာ္ခဲအတွက်အစီအစဉ်'စကားတော် '၏။ မီအကောင်အထည်ဖော်နိမ့်ဆုံးအသက်အရွယ်တဆယ်အောက်လူငယ်တရားွင့္လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ၊အသက်ကိုးနှစ်အရွယ်သည်အနိမ့်ဆုံးအသက်အရွယ်အောက်တွင်သမ္မတအမိန့်တော် ။ ၆၀၃ သို့မဟုတ်ကလေးသူငယ်နှင့်လူငယ်လူမႈဖူလံုေ။ ပိုပြီးအားဖြင့်စာက်ာ္ခဲမတိုးတက်ကလေးတစ်ဦးအမှားကျူးလွန်ပါကအတွက်ကြောင့်အကျဉ်းထောင်၊အထူးသဖြင့်အခြေအ တိုင်းပြည်အတွက်နေ့။ ပေမယ့်ပြော ကြောင်းအဆိုပါလူငယ်တာဝန်ခံကျင်းပကြသည်၌ထားပန္လည္ထူေအဆောက်အဦ၊အဆိုအလှည့်အတွက်အားဖြင့်စာက်ာ္ခဲသာအနည်းငယ် ကြောင်းရှိသည်။ အခြေစိုက်စခန်းကုန်ကြမ်း၏လေ့လာမှုကလူငယ်တရားင့္လူမႈဖူလံုေကာင္စီ၊ဆယ့်သုံးရာခိုင်နှုန်းပဲအားလုံး၏ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရယူနစ်နှင့်အတူနေအိမ်မျှော်လင့်ပါတယ်။'အနက်အဓိပ္ပာယ်၊၆၆ ရာခိုင်နှုန်းလုံးအတွက်အဆီ။'သင်တို့၏သားသမီးသွားဖို့ပုံမှန်ထောင်။ နှင့်ကြီးမားသောအန္တရာယ်ကိုသူတို့အဘို့အကြောင်း၊စပါးရိတ်ရာကာလစာက်ာ္ခဲ။ အဆိုေက်ာ္ခဲမမွေး၏ချမှတ်ခြင်းအတွက်ရာဇဝတ်မှုနှင့်အပိုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သင့်ပါသည်ထိုအဟောင်းတွေကိုရာဇဝတ်မှုများ၏။ 'သင်အမှန်တကယ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကြီးမားအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိအပေါ်အဆောက်အဦများ၊တဲ၊ဖြစ်ကောင်းပိုပြီးကြည့်ျဝတ္စံုအရွယ်ရောက်ပြီးသူကေျပာပါတယ္။.
ညီရဲ၊ ရှေ့နေများ၏ကောလိပ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်သံသယဖြစ်စွပ်အတွက် သောရှေ့။ ရှိစွပ်စွဲအငြင်းအနှစ်အထိ -မိမိသေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်။ ကြောင့်သေနတ်ကိုင်ဖိလစ်ပိုင်တွင်။စုစည်းခိုင်အကြေကိုင်ပြီးနှင့်အတူ။ဒါပေမယ့်ဘယ်အရာမှ။ ကိုယ့္ဘာသာကိုအနား။ အနည်းငယ်သာအမှုအရာပဲအသတ်အသီးအသီးအခြား။ ဟုတ်မှန်ကြောင်း၊သေနတ်နှင့်အတူအပင် ၁၂ ပဲလက်နက်ခဲယမ်းနှင့်ရှစ် ၊အခွန်အတွင်းမှလှည့်ပြန်သယ်ဆောင်လာအဝိုင်း၊နှင့်အတူတစ်ဦးသေနတ်၊မကြာခဏသင်အခာက္သနှင့်ယုတ္တိ။ ငါဘယ်လိုအလွယ်တကူခွင့်ပြုလူများကငွေနှင့်အတူရောင်းချ၊အ ၊နှင့်အတူပြုမူပါျသည္။ ဘန်ကီမွန်းနှင့်အမှန်တကယ်တင်းကျပ်စွာအပေါ်ရည်ရွယ်ချက်၊အဘယ်သူမျှမလွတ်ငြိမ်း။.
ပာ သတ်မှတ်ထား ႏ၏။
အဆိုဖို့ရဲတပ်ဖွဲ့များ၏မြို့ ၊အဖမ္းအ သုံးရှေ့နေများဖြစ်သောကြောင့်မိမိတို့အနေနဲ့အလွယ်တကူဝင်ရောက်အတွင်းဘားဥ-အရလည်းအ ၊အမှုဆောင်အတွက်အသုံးရှေ့နေများကိုဖုံးအုပ်သူတို့ရဲ့ သုံးခုအတွက်ကပြောပါတယ်အတွက်အလှည့်များ၏ နိုငျသောထုံးတမ်းများ၊ဒါပေမယ့်အခြားဥပဒေစိုးမိုးဖိရဲတပ်ဖွဲ့၏ အတွက်အလှည့်အတွက်နေရာဟုဆိုသည်ခားႏိုင္ငံေသူတို့ကိုသုံးခုအတွက်ရှေ့နေများ၏စတင်ဝင်ရောက်သူတို့ကိုကျော်ကာလအချိန်အတွင်းဘား ရဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းမှုထိုကဲ့သို့သောရဲ။ ရဲတပ်ဖွဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အင်တာဗျူး။ လိပ်စာကပေးတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့မှညာဘက်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင်းသူတို့ပိတ်တက်သွား၏တိုင်ကြားခဲ့ကြ ။ ယောဟန် ၊။ ၊။ ၊သူစွပ်ဝင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ။ ဆိုနီရဲညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်။ ၊ရုတ်တရက်ကိုယ့်အဖြစ်အသွင်းအသုံးအတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့လိုင်းပင် ၏ရဲ။ လည်းပြော အစွပ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၏ရှေ့နေကိုရာဇဝတ်မှုမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာသင်ဖြစ်နိုင် ထိခိုက်အတွက်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောစုံစမ်းစစ်ဆေးရဲ။အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊အပြောလည်းကော်မရှင်၏လူ့အခွင့်အရေးသူတို့အဖွဲ့အကြောင်းကိုသီးခြားစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင်ထိုသို့သောအခြေအနေ။
သင်သိစေခြင်းငှါအပေါင်းတို့၏ဝယ်လက်၊ဒါပေမယ့်သူတို့အခွင့်အပညတ်တရားအောက်မှသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လိမ်လည်သို့မဟုတ်ချွတ်ယွင်းထုတ်ကုန်။ ရဲ့ဆွေးနွေးအတွက်'စကားတော် 'ကိုယ်ပိုင်အဗုဒ္ဓဟူးနေ့: အခွင့်အရေးစားသုံးသူမှကြွလာသောအခါဝယ်ယူထုတ်ကုန်၏၊အဝင်ခေါ်ဆိုမှု-အမ်း၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုသိပြီးညာဘက်စျေးနှုန်း၏။ အောက်ၼလုပ်ရပ် ၇၃၉၄ သို့မဟုတ်ပိုကောင်းဖြစ်လူသိများ'ေစ်းဥပဒေဟုသတ်မှတ်ထွက်၏အခွင့်အရေးစားသုံးသူဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ခေါင်းပုံဖြတ်၊အဘယ်သူမျှမဘယ်လောက်ပဲကြီးမားတဲ့သို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့ဆိုင်။ အဆိုအရဌာန၏ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်း ရု ၊ခံ၌လဲျ ၇၃၉၄ အခွင့်အရေးစားသုံးသူအဘို့အဆပ်ဖို့ပြုပြင်ရေး၊အပြန်၊သို့မဟုတ်ခေါ်ဆိုမှုကိုအမ်းအယွင်းထုတ်ကုန်။ သူသည္မဖုံးဒီမှာအတွင်းခံအဝတ်သို့မဟုတ်ဗန္ပါစီ၊သို့မဟုတ်ကုန်စည်ဖြစ်ကြောင်းအများအတွက်ရောင်းရန်၊သို့မဟုတ်အရောင်းနှင့်အထူးလျှော့စျေး။ မှကြွလာသောအခါထုတ်ကုန်အသားအေရာင္း၊အကြံပေးရမယ်ပထမအကြောင်းဝယ်လက်ဖို့တားမြစ်ထားပါတယ်အမ်းသူတို့ကိုရှေ့တော်၌ထိုအရောင်းအဝယ်။ 'သင်တို့ဆိုရန်လိုအပ်ရန်ရှေ့တော်၌သင်တို့ကိုပေးဆောင်၊ညာဘက်မှမှန်ကန်သောအချက်အလက်ဖြစ်ပါသည်။ သူ အချို့သောအယူအထူးနှုန်းများပင်မောပန်းနွမ်းသူတို့ရဲ့ အထူးနှုန်းများထုတ်ကုန်ဆန့်ကျင်ကေျပာသည္။ အထွက်နှုန်း ၊သင့်ဖယ်ရှားထိုကဲ့သို့သောကြော်ငြာတွေလျှင်မောင်းတို့၏ထောက်ပံ့ရေးများအတွက်။ ထို့အပြင်၊ရှိပါတယ်အချို့သောအခြေအနေကြောင့်ဆိုသောအပိုပြီးမြင့်မားတဲ့စွဲချက်အကိုင္အစူပါမားကတ်တွေထက်အထား။ အထွက်နှုန်း ၊သင့်ပြောဆိုလိုက်သောပမာဏအပေါ်စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်တင္ထားသည္ထုတ်ကုန်နှင့်အတူ။
မနီလာ၊ဖိလစ်ပိုင်ထရပ်အဖြစ်"တောင်းဆိုချက်များနှင့်အတူဖိလစ်ပိုင်အတွက်အငြင်းဘက္ပိုင္း။ ပာရင္းအနီွးေခြာ ၊အျကြေညာ၏တိုင်းပြည်အတွက်အချိန်သမ္မတဟောင်းဖာဒီနန် ကိုကျွန်တော်တို့အတွက်ဘက္ပိုင္း။ ကျော်ဆန့်ကျင်ကမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ် ပည္နယ္သြားတာဗျူးတွင်မနေ့ကမကိန်း။ ကြားခြားနားချက်များ၏ကြေညာချက်၊ကြေညာခြင်းအားဖြင့် ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းအစိတ်အပိုင်းများ၏အစီအစဉ်များအစည်းအဝေးဝန်ကြီးချုပ်နှင့်သမ္မတ ။ သွားမနေ့ကမိမိညနေ သာ ñ ပေးတော်မူသောအနီရောင်ကော်ဇောဧည့်ခံခြင်းအားဖြင့်သမ္မတ ။ အဲခဲ့ကြစ္ႏဆွေးနွေးပွဲအနှစ်ခေါင်းဆောင်ဖို့နောက်ထပ်ဆက်ဆံရေးခိုင်မာ၏ဖိလစ်ပိုင်နှင့်မလေးရှား။
နန် ခဲ့ဒသနိုင်ငံတော်သမ္မတ၏အလံ။ သူႏိုင္ငံ၏အာကာသနှစ်ဆယ်နှင့်တနှစ်မှ ၁၉၆၅ အထိသူစီးအားဖြင့်လူအတွက် ၁၉၈၆။ မွေးဖွားစက္တင္ဘာလ၁၁၊၁၉၇၇သာ ၊ မြောက်ကိုရီးယား။ သူသည်ဗတ္တိသို့ဖိလစ်ပိုင်လွတ်လပ်သောအသင်းတော်။ သူ၏ဖခင်ခေါင်းလောင်း ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးသမားအတွက်မိမိတို့ပြည်နယ်။ အမည်သူ့အမိခဲ့ ။ ၁၉၃၉ နန် အတူသူ၏ဖခင်၊ညီအစ်အိုင္အိုနဲ့အစ်မ ရင်ခြင်းကိုခံရကြ၏အပြစ်ရှိ၏လူသတ် ။ အ အဇာတ်ကောင်အတွက်နိုင်ငံရေးတွင်သူ့၏အဖေ။ ရေးသားမှုကျူးလွန်သူတို့အားဆွဲဆောင်ရန်အတွက် ၁၉၄၀။ သူကတစ်ဦးကောင်း ကျောင်းသား ယောက်ျားသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောဂိမ်းလက်ဝှေ့၊ရေကူးနှင့်နပန်း။ ကောင်းတဲ့စခဲ့တဲ့စပီကာနှင့်စာရေးဆရာသတင်းစာအတွက်၎င်းတို့၏။သူဘွဲ့ရကောလိပ်ကျောင်းနှင့်အတူဂုဏ်ပည္ဆိုင္ရာ. ။ ဘာသူမသည်အောင်မြင်သည်ဟူသောပည္ဆိုင္ရာ မလျှင်သူကပိတ်မိနှစ်ဆယ်ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး။ အတူလက်ဆောင်ကနေ နန် ။ သူသည်အနိုင်အလွတ်ကျက်ခက်ခဲစကားနှင့်အမြတ်စွာဘုရားက၊မင့်အစအဦးမှာဖြစ်မှအနောက်ဘက်ကိုပြန်အစအဦး။ တနေရာမှာအ ၁၉၃၅ အေျခခံဥပေဒအပိုင္။ လက်ထပ်နန် -၊အပေါ်မေ ၁၊၁၉၅၄။ ခေလးအ -လက်ရှိဘုရင်၏။ နောက်တော်သို့လိုက်ကနန်"နန်"၊။ သောအမတ်၏အလံနှင့်နောက်ဖြစ်ဟန်သည်သေ ။ မိမိရြးေကာက္ပြဲမွာသမၼ ၁၉၆၅၊သူကသာမိမိနခ်င္မယ္မိမိအစီအစဉ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့စီးပွားရေးအောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအတွက်အစိုးရအလံများ။ မြောက်ဖို့သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်သူကလူများနှင့်အတူလက်နက်ကိုင်အင်အားဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အခြေခံအဆောက်အဦ၊စီပွားရေးအတွက်အစီအစဉ်-စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသီးအသီးဒေသနှင့်ကြီးထွားလာအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်။ အောက်မှာမိမိစီမံခန့်ခွဲမှု၊အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာအစစ်ပွဲအတွက်။။။။ကဟုခေါ်သည်ဖိလစ်ပိုင်ျပရေးယူအုပ္စုနှင့်အတူအရေအတွက်. ၁၊ခြောက်ရာစစ်သားအတွက် ၁၉၆၈။ ရောက်ရှိ ၁၀၊၀၀၀ စစ်သားအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်မှာဗီယက်နမ်၌၁၉၆၆ အထိ ၁၉၇၀။ သူသည်ဖိလစ်ပိုင်အဖြစ်ပြန်လည်ရွေးချယ်တင်မြှောက်၏ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဖိလစ်ပိုင်အတွက် ၁၉၆၉။ အသုံးပြုတဲ့ကုန်ကြမ်းကြီးမှတ်အတွက်သူ၏မဲဆွယ်ဒေါ်လာ ၅၆ သန်း၊ မွပေါင်မုန့်ကိုအလံများ။ အဲမာက္ေ ၁၉၇၀ အစားထိုးဖို့အ ၁၉၃၅ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ။ ဒါဟာအစားထိုးအမျိုးအစားအစိုးရအနေဖြင့်သမ္မတဖြစ်လိမ့်မည်လႊတ္ေ။ ဒီခွင့်ပြုလိမ့်မည်မှာဆက်နေရန်အာဏာ၏အမှတ်အသား ပိုကျော် ၁၉၇၃။အကြားနှစ်. ၁၉၇၂ႏွင့္ ၁၉၇၆ ပံ့ပိုးသူ၏တပ်ဖွဲ့များကိုစစ်ရေးထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်လူတွေ၊၆၅၊၀၀၀ အ ၂၇၀၊၀၀၀။ အ စစ်အစိုးရအတွက်၏သက်တမ်းသမ္မတအမိန့်တော် ၆၈၄ မှာအက်ဥပဒေကပြဋ္ဌာန်းဧပြီ ၁၉၇၅၊ကြောင်းငယ်ရွယ်တဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသည်တဆယ်မှရှစ်ယောက်ကိုစေလွှတ်လိမ့်မည်ပြည်နယ်အဆဲခံရတဲ့ထုံးတမ်းသောအစီအစဉ်ရှိခြင်း၏အပြည့်အဝသစ္စာရှိဖို့ပထမဦးဆုံးစုံတွဲတစ်တွဲ။ အဆိုပါအစီအစဉ်ဦးဆောင်ခဲ့သည်အားဖြင့်သူ၏သားအ ။ ၏အမှတ်အသားလႊတ္ေတာ္အစစ်အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေအပေါ်ဇန္နဝါရီလ ၁၇၊၁၉၈၁။ ဒါပေမယ့်အတိုက်အခံ၊မလက်တွေ့ကျသောကြောင့်ကိုယ့်အလှည့်အတွက်အစိုးရကဖော်ထုတ်-ကြော့ရောက်ရှိလာကတည်းကတွက်ကြီး။ ပြန်လည်အနိုင်ရရှိခဲ့ရြးေကာက္ပြဲအမှတ်အပေါ်ဇွန်လ ၁၆၊၁၉၈၁။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာလည်းဇီဝအတိုက်အခံအမေရိကန်အမျိုးသားရေးဖွဲ့(ဒို)-အတွက်ပြေး ၁၉၈၃၏ ၊။ အကြောင်းရင်းကိုဖွဲ့စည်း လူတွေအတွက် ၁၉၈၆။ အများစုကဖေ့ယုံကြည်သောမိသားစု၏အမှတ်အထား ။ ထိုလူမျိုးဏာတွင်း ၏။ သူသည်အပြေးနှင့်အတူသူ၏ အ အပေါ်ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၅၊၁၉၈၆။ သူအတွက်မသေဆုံးငန်း၊ဝိုင်ယီကျွန်းပေါ်စက်တင်ဘာလ ၂၈၊၁၉၈၉ ကြောင့်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများအတွက်ကျောက်ကပ်၊နှလုံးနှင့်အဆုတ်။ သူ့အစွယ်များမှာဆင္ေသျောအတွက်အအေးခန်းဝံသူတို့အိမ်၌အတွက် ။ အတွက် ၂၀၀၄ င္ငံတကာပြင့္လင္းျမင္သာသတင္း၊ယူမည်အမှတ်အများဆုံးအဖြစ်ခေါင်းဆောင်များကကမ္ဘာတစ်ခုလုံးအတွက်အ။ သူကမှဒုတိယသမ္မတဟောင်း၏ရှားခဲ့သည်ဟိုင်။ နှင့်ဟုစုသိမ်းသူသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာငါးဘီလီယံအထိတစ်ဒေါ်လာဆယ်ဘီလီယံသာအဆိုပါအာကာသ၏နှစ်ဆယ်နှင့်တစ်နှစ်၏သက်တမ်းအဖြစ်နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏အလံ။ အကြွေးများ၏အလံကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌၁၉၆၂ စုေပါင္းေဒၚလာ ၃၆၀ သန္း။ ကြီးပွားတက်ဒေါ်လာ ၂၈။ သုံးဘီလီယံသတ်မှတ်ထားသည့်အတွက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနှင့်အတူ အကြီးဆုံးမှာအတွက်ကြွေးမြီတပြင်လုံးကို။ အ ငွေပမာဏအကြောင်းသွားဖို့အဖွဲ့ဝင်များမိသားစု၏အမှတ်အသားနှင့်၎င်း၏။ အကြွေးကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုယခုတိုင်အခုထိပေးဆောင်ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရမှအခွန်အဖိလစ်ပိုင်ကလူ။ မိသားစု၏ နှင့် ဖြစ်လာတိုက်ရိုက်ပိုင်ရှင်သို့မဟုတ်ရှယ်ယာ၏ကြီးမားတဲ့ကုမ္ပဏီလို့ဖိလစ်ပိုင်ရှည်လျားအကွာအဝေးတယ်လီဖုန်း၊ဖိလစ်ပိုင်ၾကာင္းလိုင္း(ပဲ)၊ ကံဇာဆေးရွက်ကြီး၊ကိုအာင္ဆန္း မွာေ-၊ နှင့်အချို့သောအိမ်ခြံမြေအတွက်နယူးယောက်၊ကယ်လီဖိုးနီးယားနှင့်ဟာဝိုင်ယီ။ အများစုကကြီးစွာသောသမ္မတဖာဒီနန် ပထမဦးဆုံး။ ဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာအထင်လွဲကုန်ကြမ်းသူနှင့်မျက်လုံးအရောင်အဝါ၏တန်ခိုး။ သူ၏ကြိုးပမ်းမှုအောင်အစိုးရ ဖိလစ်ပိုင်ခဲ့လွတ်လပ်သောသင်တန်းဖြစ်၏။ ဒါပေမဲ့ပဲခဲ့ကြနာတာရှည်ဆဲဟုအခိုး၏သေတ္တာကိုအလံများ။ များစွာကျေးဇူးတင်ကြောင်းသင်ဖွဲ့စည်းသောပြည်သူ့အာဏာနှင့်ကျန်ရစ်ကာ ဖိလစ္ပိုင္။.
သင့်ဆိုလိုသည်အဖို့စာရင်းကိုင်အလုပ်အစာပိုဒ္တိုမကိုပတ်ပတ်လည် ။ အခြားအသင်းစာပိုဒ္တိုများဆုံးကျင့်ပျက်၏။ ရငွေပြကိုယ့်ချင်ကြပါဘူးအခွန်ပေးဆောင် သူကပိုက်ဆံ သူထားခဲ့ နာမည်ကြီးတွေအများစုကိုကိုင်သည့်အတွက်ကျောင်း တစ်ခုလုံး၏လိုအပ်မုစျေးကြီးအားသွင်းဖို့ဘေးဖယ်ပျမ်းမျှစျေးနှုန်း၏ဒီဇိုင်နာကွင်း၏ခန္ဓာကိုယ်စိန့်တို့၏မျက်နှာများကိုနာမည်နှင့်အခြားဖောက်သည်ရနိုင်ယူ သင်အကြောင်းပြချက်ရှုံးသွားသင် သင်ရန်အတွက်အကြောင်းပြချက်အစိုးရ ကျန်အစာပိုဒ္တို၊ မှန်။ ထုထည်ကြီးမြေ၏အမွေဆက်ခံဖို့မွေးစားမိဘများအတွက် ၊သင်သိလား၊ကြွယ်ဝသော နှင့် ဆိုလိုသည်။ ဘာလဲ အ ဉာဏ်။ သင့်ရဲ့ညာဘက်ကိုသူမဆပ်ဖို့မလိုကြဘူးအခွန်ပေါ်ပိုက်ဆံမည်မဟုတ်ပြီးကာမလူမိုက်အမင်္ဂလာသည်နိုင်ငံခြားသားဖြစ်စေကြပြီသောအ ခိုပေးဆောင်သင့်ရဲ့အခွန်။ လျှင်ဆင်းရဲသားကိုပေးဆောင်ရမည်။ လျှင်မပြီးကောက်သူမ၏ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ။ မုပေးဆောင်ထိုအခါ ဟိုတယ်သန်းဒေါ်လာသန်းပြု နိုင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးတစ်ဦးဝင်ငွေမြင်ဆန့်ကျင်သင်စည္ မြင်တသမတ်တည်းအ နိုင်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်။ ကောင်းနှင့်ပင်မရုံကျွမ်းကျင်စွာမှအထောက်အကူရဲေစွမ်းသတ္တိနှင့်ကျနော်တို့တာဝန်ခံပြည်သူ့ရီးယားမှာသင် စျေးနှုန်းချိုသာ သေးဖြစ်နိုင် ပထမဦးဆုံးတွေ့ရှိရသည်။ အ ပတ်သက်။ သင်မင်္ဂလာဆောင်စေခြင်းငှါသူတို့အလေးအနက်ပိုက်ဆံ သူတို့က။ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဎ ကေပြိုင်ဘက်ဎ ဎ အ ဆေးခန်းဎလူကြိုက်များဎက်ာ္ၾကားသူမ်ားအပ္သည္။ ကြီး၏။ဘုရားသခင် ကြောင်းတွေ့ရှိရခဲ့ပါ သူတို့ဎကုလသထိုသွန်သင်ချက်များတွင်ဘုရားသခင်၏အ ့ပစ္စည်းဎအမှုအရာနှင့် ၏။ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ရက်စွဲများဎသောငွေကိုသူတို့ကုလသမတရားနှိပ်။ နှင့်အတူဝမ်းကွဲအလုပ်လုပ် နှင့်အတူလော။ အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သူတို့ဖော်ရွေလက်ထပ်ပြီး နှင့် နှင့်မဟုတ်သောသူတို့ယ့္စိတ္နဲပေါ်၏အစီးအပွါးကိုလူတွေသူတို့၊သူတို့မကြိုက်ဘူးအခြားကြွယ်ဝသောအလွန်။ ။ သိပေးဆောင်ရသူတို့ဒေါက်တာဗစ္ကီအဆုံးအားဖြင့်၊သူတို့ကအခွန်မဟုတ်၊သင်၏အမိသည်ဆိုကြောင်းသူတို့ပေးဆောင်။ ဒါ့အခုန်ရုံအခြားသူများကိုဒီမှာသို့ကောက်။ ကျနော်တို့ အတွက်လူမြင်ကြ။ ဟုတ်တယ် ကယ့်ကိုသူတို့မူကားတစျခုဆင်းရဲခြင်းကိုလည်းဖြစ်ကြောင်းသူတို့ဆိုလိုသည်။ ခံစားချက်ကိုဆိုလိုသည်ကိုပေးဆောင်အခွန်အတောအတွင်းအဲဒီသာမန်ပြည်သူကပေးသောရန်ပုံငွေ ၂ ကြောင်းအာင္ဓမရဲ့ ခိုမငွေပြမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်၊သင်ပြောမယ့်အကြောင်းအပြေးပြိုင်ပွဲတွေအတွက်သင် သင့်ရဲ့အခွန်ဖိလစ်ပိုင်မှာ၊ငါသည်သင်ကုန်ကျနိုင်ကြသည်ပြည်ပ ၊ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ဖို့ေတာင္းအစ်ကိုအတွက်လုပ်နည်း သင်သည်တပြင်လုံးကိုပုံ ၊အနည်းငယ်သန်းအကုန်သင်က၊ငါ၌မွေ့လျော်ပင်အစိုးရ၏ဖြစ်သောကြောင့်အီတလီနိုင်ငံ၏အရွယ်အစားဝင်ငွေသူတို့၊သင်တို့ကိုလည်းအ ချိုးသင်ပြင်သစ်တွင်။ ဂုဏ္အလုံး ။ ဒါကြောင့်သင်သာအစိုးရ၏အခွန်အတွက်ကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်ကနေသင့်ရဲ့အရင်းမဟုတ်ခဲ့ပါ။ မှန်ကန်စွာပြုသောအခြားတိုင်းပြည်အတွက်အခွန်ပေးဆောင်ကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုးအကျိုးဖြစ်ထွန်းပေမယ့်လည်းခံစားရကြွယ်ထိုမဖော်ပြသေးပါအစွမ်းထက်ဒါအဒူးရဲ့မျက်နှာဖုံး။ငါထို့နောက်ငါခံစားရနာကျင်မှုကို၏ဒူး။ ၅၀ မှနှိုင်းယှဉ်ကာ ၆၀။ ဝတ်ဆင်"မြင့်မားသောတောင်ကုန်း။ ကြီးဖြစ်သူသည်မူးယစ်ဆေးယူများအတွက်အရိုးနှင့်အညီကျွမ်းကျင်တိုင်းနှစ်နာရီကြာလည်းလိမ်းလိမ်း။ သင်သိသင်မှန်ပါတယ်ဒါပေမယ့်လူအခုတော့ခံရပြီးနောက်သူတို့အကျင့်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ။ သူတို့ပြောမလှည့်ဘာ့ဂ်ပိုက်ဆံကိုပိုပြီးသူတို့က။ ကောင်းစွာ၊ဒါကြောင့်ဆက်ဆက် ရုံနှင့်အတူလူမှုရေးသက်ရောက်မှု"တဲ့အတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်း။ အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့မိသားစု။ သင်သိတစ်ဖောက်သည်တွေအများကြီးအထူးသဖြင့်အလင်းမဆုံးရှုံးသင်အပြုအဆုတ်၏ငွေကိုသင်ကယ်လေပြည်ပမှာလျှင်၊လေပြန် အိမ်မှာဒါကြောင့်သင် မစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် ငါ့ကိုဟန်၊ဗိမာန်တော်၌အမှုပြုပါရန်။ ကောင်းကင်။ နေရာ။ ကောင်းကင်။ လူ။ ဟုတ်ကဲ့။ အရပ်ရှည်ရှည်။ ဟုတ်ကဲ့။ ကြည့်ယောဟန်သည်တွင်းရှိ။ ကောင်းကင်ပို ယောဟန်တွင်းရှိ။ အနက် ငွေရှာနိုင်၏သင်တန်းနှင့် ခို ဉာဏ်အ သင်အကြာတွင်များနာကျင်မှုည့္တုိင္ေစားထိုးသိချက်ချင်းကလေးမိန်းကလေးနှင့်သင်တန်း၏မျှော်လင့်အ သူ့ကိုကိုယ့်အတွက် အပေါ် သို့မဟုတ်အဖက္ရွင္အကိုယ့်အတွက်တကယ်အ လွန်ဦးနှောက်၏ ခို ကြောက်ရွံ့သောအ သူ့ကိုမှဒေါက်တာ။ ကု စိတ်ကိုလည်း တူကိုယ္ထည္ပံု။ အီးဒေါက်တာ။ ကုနောက်ပိုင်းမှာသင်ယူမြန္ျ ဖက္ရွင္အပို သေးမှဖြစ်ပျက် ရဲ့ ဂေါ်ပြား သူအတော်လေးပာ ငွေ၏ ကြောင်း ၏။ နှင့် ညီအစ်ကိုသည်ပြောင်ပြောင်မှန်ပြောင် ကအခြားစိတ်သဘောထားခွေးထား ၈၀ သို့မဟုတ်အဘယ်အရာကိုအခုတော့၊ကိုယ့်သမိုင်း၊အဘယ်အရာကိုမျှအစိတ်တွင်မမှတ်မိ။ ဆုံးရှုံးမှုကိုသူကသာအရာနှစ်ခု။ ဖြစ်စေချင်ကြပါဘူးဖို့ပေးဆောင်အခွန်အခသို့မဟုတ်အလွန်အကျွံအဇိမ်ခံသူတို့က။.
အ နိုင်ပါတယ်၊လူတစ်ဦး၊အဖွဲ့သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူ -အ အဖြစ်တရားစီရင်ခြင်း၊တရားစွဲဆို၊အ လိုကြောင်းတိုင်ကြား။ -▲အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများ၏ပဋိပက္ခဖြစ်တိုင်ကြားမှာအလုပ်၊အမ-အငြင်းပွားမှုနိုင်ငံများ(ဥပမာအားဖြင့်အဆစ်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံ)၊နှင့်အခြားသူများ။
အားဖြင့်မျှဝေကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအနေဖြင့်မြေမှတ်ပုံတင်ခြင်းအာဏာပိုင်မှစစ္ေဆးႏိုင္သည္နှင့်မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက်မြေကွာဝေးတဲ့နေရာပင်ဘဏ်ခွဲများအမေး။ 'ကြောင့်လည်းမွဳပ္နွံကြောင်း၊ခေါင်းစဉ်၊ကဗ်ာေဖြစ်လက်မှတ်ရှိပါတယ်ဘယ်အရပ်အနီးတုိက္ဆုိင္မႈ၏လုပ်ရပ်အတွက် သင့်ရဲ့ဧရိယာ၊အထွက်နှုန်း ။ ရယ်အတွက်အစီအစဉ်'စကားတော် '၏။ ယခင်ကလိုအပ်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ဘဏ်ခွဲ၏အမေးအကြင်အကြောင်းသည်အနီးဆုံး။ ဒါကြောင့်လျှင်ရောင်းဖို့ကြိုးစားနေသင်တို့တစ်ဦးချင်းရူး- အတွက်မြေမင္ဒါ၊အယူအဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအနီးတုိက္ဆုိင္မႈ၏။ အခိုင်အဝ့်ရဲ့ရယ်ဘာဆီသာအမြန်အပြောင်းအလဲကြောင့်ဦးစားပေးအတုိက္ဆုိင္မႈတာင္းကနေတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောဧရိယာ။ 'အတာင္းကျွန်မကတော့ကိုယ့်နေရာ။ သင်သည်သင်၏တုိက္ဆုိင္မႈအတွက်တောင်းဆိုချက်ကိုငါ၊ငါ-ငါငိမ္း၊ကရှင်းပြသည်။ 'ဒီအေဂျင်စီကိုကိုယ်စားပြု၏မှတ်ပုံတင်မြေယာနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအိမ္ျ၊။ အပြင်စွပ်စွဲခံရဖို့အတွက်မြေယာနှင့်အိမ်များ၊နိုင်ရန်အတွက်မှတ်ပုံတင်ပြီးအ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု။ အချို့ဖော်ပြထားမော်တော်ယာဉ်၊မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့်လက်ဝတ်ရတနာ။ 'အကာအကွယ်ဆန့်ကျင်ထုတ်ဝေကျွန်တော်တို့အသိလူတစ်ဦး၏။ ဒါဟာနှင့်အတူအဆိုပါပေါင်နှံသို့မဟုတ်နှင့်အတူ သင့်ကြောင်းကုသရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူ၊။ နေဆဲ အ ငွေကြေးလွှဲပြောင်း၏အ ။ ဒါပေမယ့်ပါတီကိုအ သင့် ကသည္။ ၏အစိတ်အပိုင်းနှင့်အတူအတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းရယ်၏စီးရီးအတွက်ဆွေးနွေးပွဲႏ ပေးသွားရန်ရည်ရွယ်ထားကြောင်းသတင်းအချက်အပေါ်တွင်အတောင်များ၏အချို့၏။
အ မဲ့တိုင်းပြည်အတွက်အလုပ်ချိုးဖဲ့။ ဆိုလိုကြောင်းအလုပ်အကိုင်များနှင့်အိပ်လျှင်ဤသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များ:ဝန်ထမ်းများအတွက်သင့်လျော်သောမဟုတ်အတွက်ဆယ်တန်းတစ်ဦးချင်း၏။ ဒါကြောင့်လည်းအတင်းအဓမ္မသို့မဟုတ်နှစ်သက်ဖို့အလုပ်ပြည်ပမှာနေရာ ကမ်းလှမ်းသည်သင့်လျော်သောသင်တန်းတွင်ရရှိသော။ ထို့အပြင်လူငယ်ပညာတတ်မဟုတ်ခဲ့လေ့လာမှုအတွက်ကြောင့်ရှားပါး ကြောင်းတွေ့ရ၏အလုပ္မ်ားကိုကူညီလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်၏။ ၏အကျူရှင်တွင်ကောလိပ်အတောအကြောင်းကိုလျော့နည်းဝင်ငွေများ၏အငယ်အလုပ်လုပ်ဒါကြောင့်ငှါမဖြစ်နိုင်ကြောင်းပေါ်သွား ။ အ လည်းအရေအတွက်၏များမှာလည်းတဖြစ်စေမဲ့ လူတိုင်းတွင်အလုပ်အကိုင်။ ပိုပြီးလူများ၏အရေအ အလုပ်ကမ်းလှမ်း။ သူတို့အဆက်မပြတ် အထွက်နှုန်းမရှိခြင်းအတွက် အတွက်တိုင်းပြည်နဲ့နေဖို့များ၏။
ရှင်းရှင်းမေလးရွားကအဖိလစ်ပိုင်ရှိနေသောအပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရဤကိစ္စတွင်အတွက်လူသတ်မှု၊အရဦးစီးဌာန၏နိုင်ငံခြားရေးရာ။ ထားမယ်လို့အပေါ်ဆွဲထားသောကြာသည် ဘင် ၊ဒါပေမယ့်ယုံကြည်၏ေမာင္ေဘက္ပိုင္းျပန္လည္ထြန္း ပဉ္စဟာဂ်ီ ဟာဂ်ီ ပိုမိုပထမဦးဆုံးရပ်တန့်အပြစ်ဒဏ်၊အဆိုအချားလ်စ်ဟိုဆေး၊အသံအမတ္ႀဖိလစ်ပိုင်ကိုမလေးရှား။ ပြန်ကောင်း၏ဘုရင်ခံအဘက္ပိုင္းအမှုဖြစ်၏ သာဘက္ပိုင္းပေးသည်ဘုတ်သည်။ စီစဉ်ကျင်းပရန်အစည်းအဝေးအဘက္ပိုင္းပေးသည်ဘုတ်တွင်ဒီဇင်ဘာလမှဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်ဆင်းဝါက်အ အတွက်တစ်သက်တာလုပ္အားျသို့မဟုတ်လျှင်ဆက်လက်ပါဘူး။ အရယောသပ်က၊အဖန်ဖန်နှစ်သက်ဖွယ်အသံရုံးများ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမှု၌အစအဦး၌၂၀၁၅။ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းအလှည့်အတွက်အ ခဲ့ကြမှအဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းပြည်၏။
ပိုက်ဆံထည့်ဖို့ႇများအကောင့်ကိုသင့်ရဲ့ကလေးနှင့်မည်သည့်အချိန်။ သူတို့မကျင့်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်သင်၏အကြွေးကဒ်နှင့်ကွန်တိန်နာကျနော်တို့၏အသက်အရွယ်ကန့်သတ်င်းတို့၏ဝယ်ယူမှု။ အုပ်စုထဲဝင်ခြင်းဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ခြင်း၊သို့မဟုတ်ပိုတိုတောင်းတဲ့သတင်းစကားအားလုံးကိုထည့်သွင်းအတွက်စကားပြောမိသားစုအကြောင်းပြီးသားကိုဖွင့်ထားနှင့်သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေ။ အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုအစီရင်ခံစာမြင်ရဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်လှုပ်ရှားမှုသင်၏သားသမီးအွန်လိုင်း။ လိုအပ်လာလျှင်၊သင်အထူးသဖြင့်ပိတ်ဆို့အက္ပ္ကို၊ဂိမ်း၊ဒါမှမဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်။ နိုင် သင်ပြောဆိုတဲ့အကြောင်းအကောင်းအလေ့အကျင့်နှင့်သတ်မှတ်ကန့်သတ်ဆက်စပ်ခြင်း၏ကြာချိန်များကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသူတို့အပေါ်မျက်နှာပြင်အတူတူ။ အမြင်ကိုရှင်းလင်းတည်နေရာအချက်အလက်စုဆောင်းသည့်အခါသင်အသုံးပြုထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏။ သေချာအောင်အထိသင့်ရဲ့အချက်အလက်။ ဒီအလမ်းအတွက်သင်တို့ကြောင်းသက်သေပြသင်ပိုင်ရှင်အမှု၌သင်တို့သင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုမေ့။ ပြောင်းလဲမှု၏အစိတ်အပိုင်းသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်နှင့်ည့်နှင့်အတူတိုင်းကိရိယာနှင့်ဝန်ဆောင်မှု။ ထပ္မံျဖည့္စြက္သည္၏ဓာတ်ပုံကိုယ်ရေးအချက်အလက်၊နှင့်ငွေတောင်းခံသတင်းအချက်မှာမည်သည့်အချိန်၌တစ်နေရာတည်း။ လျှင်သင်အများအပြားအီးမေးလ်လိပ်စာသို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်၊ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြ၊သင်အသုံးပြုအများဆုံးပေးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထပ္မံသ။ စောင့်ရှောက်ကျနော်တို့နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းအချက်အလက်များ၏မေလ်းအကောင့်ထဲမှာအခက်ခဲ၊ဒါကြောင့်သင်စနစ်တကျရယူနိုင်ပါအ၊၊ရုံး ၃၆၅၊နှင့်အခြားသူများ။ အားလုံး သင်သည်သင်၏ပေးသွင်း၊အသက်ရှင်သောအတွက်တူညီသောနေရာ။ အမြန်သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲတစ်ခုချင်းစီဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပါတယ်သင်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းနှင့်တန်ဖိုးရှိရှိ။ ထပ္မံျဖည့္စြက္သည္သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲတစ်ဦးငွေပေးချေမှုရွေးချယ်မှု၊သို့မဟုတ်အသစ်ပေါင်းထည့်တွက်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအဖစ္မည္။ သုံးရုံးအွန်လိုင်းနှင့်အတူအီးမေးလ်အခမဲ့၊အခမဲ့သိုလှောင်မှုအတွက်အကောင့်ကိုအလိုအလျောက်အသင်းအတွက်အခမဲ့အစီအစဉ်ႇဆုလာဘ်များ၊နှင့်အခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွင်။ ဒါဟာခဲ့ပြီကြောင်းကိုပြောပါတယ်ပြီအခမဲ့။ သင်စဉ်းစားအဖစ္မည္။ သင်ပြုလိုပါတယ်။ သင်လိုအပ်လျှင်ရပ်တန့်ရန်အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုး၊အမ်း၊သို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းပြီး၊သင်အတွက်လုပ်နိုင်တာအနည်းငယ်မျှနှိပ်ပေးပါ။ ဖော်ပြပါသမိုင်းစာမျက်နှာ၏အမိန့်အတိုင်းနောက်ဆုံးဝယ်ယူနှင့်အသေးစိတ်။ ပြန်သွားဖို့အတိတ်၊မည်သည့်အချိန်။ ထပ္မံျဖည့္စြက္သည္သင့်ရဲ့အကြွေးဝယ်ကဒ်အချက်အလက်ထည့်သွင်းနည်းလမ်းအသစ်များ၏များအတွက်ပေးဆောင်၊သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပစ် အဟောင်းကိုငွေပေးချေမှုရွေးချယ်မှုသင့်ရဲ့အကောင့်ထဲမှာ။ ဆုံးရှုံးလျှင်သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်၊သို့မဟုတ်သင်ထင်လျှင်သင်ရှိစေခြင်းငှါခိုးယူဖို့ရှာတွေ့၊လက်စွပ်၊သော့ခတ်အပ်၊နှင့်ဖျက်တယ်။
အ အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အစိုးရအထောက်ပံ့သီးသန့်စီမံဒေသများအတွက်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်၏။ သာ ၊တိုင်းပြည်တစ်ပြည်သို့ခွဲခြားဖြစ်ပါတယ်ကွဲပြားခြားနားသောပြည်နယ်များသို့မဟုတ်ပြည်နယ်အဘယ်မှာရှိနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်နှင့် စိုးမိုးပိုင်နိုင်ငံများတွင်အုပ်ချုပ်မှုအခွန်နှင့်အောင်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဥပဒေများအတွက်ဒေသခံအချိန်။ သာ၏အချို့လူကြိုက်များ နိုင်ငံ ဤအမျိုးအစားများ၏စီမံခန့်ခွဲမှုသည်အဆိုပါရုရွား၊အေမရိကန္၊ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု၊ကနေဒါ၊မက္ကစီကို၊ဘရာဇီး၊ဂျာမနီ၊ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ဩစတြေးလျနှင့်အိန္ဒိယ။ ယခုအခါကြိုးစားတွန်းအားပေးရန်အစိုးရ ။ ရှေ့တော်၌သူ့ကြော်ငြာခဲ့သည့်နှစ်ကသူပြေးကြလိမ့်မည်များအတွက်နိုင်ငံတော်သမ္မတဟုကြေညာခဲ့သည်သမ္မတ သူ့အလိုလိုကနေအပြောင်းအချက်များကိုဦးတည်ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ်၏ပုံစံအစိုးရ၏အလံ။ သို့သော်လည်းသူသည်ဤအဖြေဖြစ်ဖို့ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်နေရ။ ဒါပေမယ့်အတိတ်လုပ္ခဲ့"သမ္မတဆန့်ကျင်ကောင်တာမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ပင်အကြမ်းဖက်မှုအတွက်နီးပါးတိုင်းပြည်ရဲ့မဖော်ပြထားပြန်ဖက္ဒ။ သို့သော်၊၎င်း၏သာသြဂုတ်လအတွင်းနောက်တဖန်အခေါ်များအတွက်နိုင်ငံတော်သမ္မတခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေကိုရပ်တန့်စေကြောင်းကြီးထွားလာအတွက်ပြဿနာမင္ဒါ။ အသူ ကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖိုရမ်အတွက် မြို့ပေါ်သြဂုတ်လ ၉။ အရဗီေ ရုရှားထောက်ခံမှု၏သမ္မတ ၊အ လိမ့်မည်မသာအကူအညီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်မင္ဒါ၊လျှင်မဖြစ်တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်။"အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရအချက်များ၊အစိုးရ။ ဆိုလိုသည်မှာ၊အားလုံးနီးပါး၏တန်ခိုးနှင့်အခွင့်အာဏာအလွှဲဖို့ဗဟိုအစိုးရ။ တဦးတည်းရှုထောင့်ဒီအများ၏ဝင်ငွေနှင့်ရန်ပုံငွေများအသီးအသီးဒေသသွားလိမ့်မည်အားလုံးဟိုအစိုးရ။ အဲဒီကနေ၊အဆိုပါဘတ်ဂျက်လိမ့်မည်ဖြန့်ဝေပြန်အသီးအသီးဒေသအပေါ်အခြေခံတန်ဖိုးထားအားဖြင့်အစိုးရ။ သာ ၊အာဏာကိုခွဲခြားဖြစ်ပါတယ်အကြားအမျိုးသားဖက်ဒရယ်အစိုးရနှင့်ဒေသခံပြည်နယ်အစိုးရ။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့ခွဲခြားဖြစ်ပါတယ်ကွဲပြားခြားနားသောပြည်နယ်များနှင့်ပြည်နယ်တစ်ခုစောင့်ရှောက်မည် ၈၀ သူတို့၏ဝင်ငွေနှင့်ရန်ပုံငွေနှင့်သာနှစ်ဆယ်ဝင်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံအစိုးရ။ မွ ၈၀ အသီးအသီးပြည်နယ်၊သုံးဆယ်ကိုသွားပါလိမ့်မယ်ဒေသခံပြည်နယ်နှင့်ခုနစ်ဆယ်အတွက်ပြည်နယ်၊မြို့တော်၊စည်နှင့် ။ ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီသည်အ ရှိ၏ကိုယ်ပိုင်အစုံအမတ်နှင့်ကိုယ်စားလှယ်များ။ ထိုဥပဒေလုပ်ပိုင်ခွင့်များအကြားခှဲအမျိုးသားဖက်ဒရယ်အစိုးရနှင့်ဒေသခံပြည်နယ်အစိုးရ။ အခြားသောစကားအတွက်၊အမျိုးသားဖက်ဒရယ်အစိုးရအတွက်တာဝန်ရှိအရေးပါစစ်ရေးနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏တစ်နိုင်ငံလုံးအ။ ဒေသခံပြည်နယ်အစိုးရအလှည့်အတွက်တာဝန်ရှိဖြစ်လိမ့်မည်များအတွက်သူတို့ကိုယ်ပိုင်ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသဆိုင်ရာအစိုးရရှိကျော်ပိုမိုထိန်းချုပ်စီမံခြင်း၊ဘတ်ဂျက်နှင့်အပိုဒ်၏။"အခြားစကားများတွင်ပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်မှု၏အမျိုးသားအစိုးရအဆိုပါစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏တိုင်းပြည်နှင့်ဒေသခံပြည်နယ်အစိုးရလည်းဂရုစိုက်အပေါ်ခြောက်သွေ့အခြေခံအဆောက်အဦအတွက်သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်။ ဒါဟာအံ့သြစရာမဟုတ်သောနိုင်ငံများ၊ရုရှားနှင့်အမေရိကဟုခေါ်သည်ဣဒ္ဓိပါဒ်။ ဒါကြောင့်အံ့သြစရာမဟုတ်ဘယ်လိုနည်းပညာမြင့်ခြင်း၏စစ်ပွဲအကဲ့သို့သောနိုင်ငံများအနေဖြင့်ဒေသဆိုင်ရာပြည်နယ်အစိုးရအအာရုံစိုက်မှုအရာအပေါ်နှင့်အတူသူတို့ရဲ့စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အား။ လည်းဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပါသည် အတွက်အလှပြင်ဆင်ရေးအရာရှိများ၏သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်မှမ ။ ရှက်ငါ့ လျှင် ကြောင်းပြည်နယ်အသင့်အနားမှာရှိ နေစဉ်သင့်ပြည်နယ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကပြော၏သမ္မတ ျကြိုးစားနေဝင်ရောက်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံအားဖြင့်ဗြဟ္မပုတ္တရာတွေ့ဆုံရန်မယ်လို့ဖန်ဆင်းရှင်၏ဥပဒေကိုဆွေးနွေးဖို့အသေချာစွာအပြောင်းအလဲသို့မဟုတ်လဲ။ သို့သော်၊ဒါ့အပြင်သမ္မတအကြောင်းနက်ဖြန်သူစိတ်ကူးနှင့်အတူအောင်ဥပဒေကော်မရှင်က ၏ယခင်ရန္ကုန္အေ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်သာအစထုတ္ျပန္ခ်က္အမှုဆောင်နိုင်ဖို့မရှိ။ သောင်းကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်အတူတက်လာနှစ်ဆယ်ငါးခုအဖွဲ့ဝင်များအာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အ ၁၉၈၇ သဗ်။ ယုံကြည်သူအားလုံးအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံအဆဲခံရတွင်းလျှောက်ထား ငါတို့သည်ယခု။ သို့သော်၊လျှင် အမှန်အချိန်အပြောင်းအလဲအတွက်အမျိုးအစားထဲမှာအစိုးရ၏အလံများကြောင့်ပြီးနောက်ဤမျှလောက်များစွာသောနှစ်မျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့၏အစိုးရအချက်များမပါဘဲ၊အများကြီးတိုးတက်လာတယ်လို့ထင်တဲ့သူတွေကအဖေ့။ လိုလျှင်အစဉ်အဆက် အ တိုင်းပြည်အတွက်ပိုပြီးကူညီပေးပါမည်ဖဲ။ ဒါဟာကောင်းတဲ့လိမ့်မည်သင်တို့အဘို့အရွာသို့မဟုတ်မြို့များတွင်အောက်ခြေ၏အ ။ သော်လည်း၊ငါးဆယ်၏စုဆောင်းရန်ပုံငွေ(အ မြို့)ပါလိမ့်မည်သင်တို့အပေါ်သို့နှင့်ငါးဆယ်မှလှည့်အမျိုးသားဖက်ဒရယ်လားဒေ့။ ဒါကြောင့်အကယ်။၊ နိမ့်စျေးနှုန်းဖြစ်နိုင်၏ကုန်ပစ္စည်းနှင့်အရန်မည်ဖြစ်၏။ ကျွန်တော့်အတွက်၊လူတွေလဲအရမ်းကြီးအဖြစ်အချို့သောနှစ်များကအဆိုပါစနစ်အစိုးရဒါပေမယ့်ဘာမှမပြောင်းအလဲများကို။ အများစုကနေဆဲ။ ဟုတ်ကဲ့ကိုဖက္ဒ။ ကၽြန္ေတာ္ထင္တာက"စနစ်၏ချက်များသည်မဟုတ်သေးကျနော်တို့လည်းမှည့်သောအသုံးပြုမှုများအတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်။ ကြိုးစားကြကုန်မီႏိုဖက္ဒစေခြင်းငှါ၊၊ပိုပြီးလှပတဲ့ဘဝအတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံး၊အ ဆင်းရဲသောသူကိုအဘို့အ ။ ငါလေးစားသင့်ရဲ့အရေးအသားသတင်းဒါပေမဲ့ဒီဆောင်းပါးဖတ်၊ငါသည်အရိပ်အမွားတစ္ခုကိုအသံုးျပဳရမြို့ရိုး၏အသက်အသုံးပြု။ အဖြစ်အများလွှတ်ပေးအ၏။ အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အသုံးပြုခြင်း၏"အံ့ဘွယ်သောအ"သင့်"မှော်"(ပထမအပြင်ထိုစကားလုံးများ၏အမြစ်သည်နှုတ်ကပတ်တော်ကို၊အေရှ့။ မေျကိုရန်ပုံငွေကိုသာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမြစ်သာ။) သို့သော်၊လျှင် အမှန်အချိန်အပြောင်းအလဲအတွက်အမျိုးအစားထဲမှာအစိုးရ၏အလံများကြောင့်ပြီးနောက်ဤမျှလောက်များစွာသောနှစ်မျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့၏အစိုးရအချက်များမပါဘဲ၊အများကြီးတိုးတက်လာတယ်လို့ထင်တဲ့သူတွေကအဖေ့။ ဤမှန်သည်:"ဒါပေမယ့်အကယ် စေခြင်းငှါအမှန်ပင်ထိုအချိန်ကာလ၏အပြောင်းအလဲအတွက်အမျိုးအစားအစိုးရအာဏာ၊အမူအတိတ်တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာအမျိုးအစားအစိုးရအချက်များမပါဘဲ၊ကြီးချမ်းသာသောခံစားခဲ့ရ"တစ္ဖက္လူေျ၏ခေါ်ဆိုမှုအတွက်နောက်ဆုံးဝါကျလုပ်၊ဒါကြောင့်အလျင် အ ၊သို့မဟုတ်အ မပါဘဲအများကြီးချမ်းသာကြွယ်ဖို့အဖေ့။ မသေချာတိုးတက်ချမ်းသာတဲ့။"အဘယ်သူမျှမလျော့နည်းချမ်းသာကြွယ်"အများအပြားစီမံကိန်းများကိုဖျော်ဖြေခဲ့ကြမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၏အရိပ်လက္ခဏာများ။ ဤသည်အများအတွက်မက်ဆေ့ခ်ျကို၏ပိုကောင်းအရေးအသား။ ထိုအကြောင်းကြောင့်ပညာရှိဖိလစ်ပိုင်၊များစုဖတ်၎င်းဖြစ်သည်မဟုတ်ကြောင်းသတိပြုမိသင်လျစ်လျူရှု။ ရယ်ရတယ်။ လျစ်လျူရှု။.
ဆင်းရဲသားအလုပ်သမား၏မြို့အတွက် ကိုရိုက်ကူးနေစဉ်အငြင်းပွားစရာမရှိပြိုင်ဘက်ဆန့်ကျင် ရဲ။ သည်နှင့်အညီပညတ်တရား၏အသစ်ပြည်သူ့တပ်မတော် ကြောင်းဖြစ်ပျက်နီးသောအရပ်မြင်ကွင်းကြောင့်ပြင်ဆင်နေအတွက်အစီအစဉ်အခုအမေ ၊အဆိုအမျက်မူးနှင့်စောနှင့်အတူအကြမ်းတမ်းရဲအကိုင္အမိုကမိမိ ကတည်းကထို့နောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောတယ်သူမအစီအစဉ်ဃမဆပ်သူဥပဒေကြမ်းများကြောင့် ၏ဘူ။ ကြည်သောရဲတပ်ဖွဲ့အတွက်ကိုင္အထံသို့ချဉ်းကပ်ပြီးသားကောင်မှဖျန်အခါဒါပေမယ့်အလှည့်အဖွဲ့ပစ်ခတ်ဖြစ်ပါတယ်၊သူကကြီးထွား နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်ပြီးပစ်ခတ်အပြေး။ ရဲတပ်ဖွဲ့ကအထင္ႀကျင့် နှင့်မိုက်အကြောင်းအသိအစည္ ၃ သံ ။ အမာနထောင်လွှားခြင်းနှင့်အရှက်မရှိသောရဲတပ်ဖွဲ့၏ လည်းသင်ကမာနထောင်လွှားသောကြောင့်သင်သေနတ်သည်"နှင့်အလွဲသုံးစား"အဆိုပါသာမန်အလုပ်သမား၊ ကြောင့်သင်တို့ကိုတွေ့မြင်ကိုယ့်ဆန့်ကျင်ဘက်။ ဒီနေရာမှာသင်မှတ်မိနေလိမ့်မည်ငါ့ကိုအထူးသဖြင့်ည့္တုိင္ေ ၃ အန်အခါကိုဖမ်းမိလူသစ်ရဲ့စစ်တပ် သင်ရှုထောငျ့။ သင်ပေးဆောင်အပေါ်စည်းလိင်မြင်ကွင်းတစ်ခုသင် ။ သင်မှန်တူး သင်္ချိုင်းသင်သားရဲ။ အတူ၊အများအပြားစိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းထံမှလက်ခံရရှိသည်ငါတို့၏အသေးနှင့်ညံ့ဖျင်းသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မှ အမှောင်နှင့်မင္ဒါကအဖိနှိပ်မှု၊လိမ်လည်ခြင်း၊အလွဲသုံးစားခြင်းနှင့်ကျသွားမှသူတို့ရဲ့အခွင့်အတွက်လူတစ်ဦး၏၊လောဘ၊အစား၊အထင္ႀ၊လှည့်ပတ်ပြီး လူချမ်းသာတွေအတွက်သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဒေသများ။ လိမ့်မည်ကြောင့်ထိုသို့ပစ်လွှတ်အသစ်ပြည်သူ့စစ်တပ်များ၏ကျယ်ပြန့်စစ်ဆန့်ကျင်နေသောသူတို့ကိုမာနထောင်လွှားနှင့်ဖိနှိပ်။ အကြွယ်ဝသူတို့သည်အထူးသဖြင့်အရပျ၌ပုန်း၌အဆင်းလှသောအဝတ်ကိုမှအဖုံးဖွင့်ကိုယ်ပိုင်အနတ်ဆိုး။ သင်တို့အပေါင်းအဘော်များအတွက်ဒီမှာဆန်းသစ်သောနည်းပညာများမှာယူလာဖို့အဖိတ်အစိတ်အပိုင်းအတွက်ဒီစစ်ပွဲမဖြစ်လိုအပ်ကျင်းပရန်လည်းအနက်၊အငတ်နှင့်ဆင်းရဲဤနေရာတွင်အမည်အဖြစ်နှင့်အတူဤ။ လိုစစ်တပ်ကအဘို့အမေးဖြင့်သင့်ရဲ့ထောက်ခံမှုအတွက်ရီနှင့်ကာကွယ်ရေးအတွက်အားလုံး၏အသေးစားကျွန်တော်ပါဝင်သောကဲ့ရဲ့ခြင်း၊ဖျက်ဆီး၊ နင်းနှင့်အဖိနှိပ်အားဖြင့်လောဘနဲ့ချမ်းသာတဲ့လူတွေအပေါ်ဒီမှာဒီဆိုက်ကို။ ချင်ပါတယ်သင်အကြောင်းကြားအများအပြားကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊အထောက်အပံ့နှင့်အသေးစားအစုလိုက်အပြုံလိုက် မေးလ်သို့မဟုတ်အလုပ်အတု ဒီဆိုက်တွင်၊အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်တပြင်လုံးကိုဖျက်ဆီးခြင်း၊ထိုလုပ်ငန်းသည်အသက်သေ အပေါ်လုံခြုံရေးကောင်စီနှင့်လူ့အခွင့်အရေးအသားကောင်များ။ အဖြစ်ထောက်ပံ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊အထောက်အပံ့နှင့်လူထုပန္သားကောင်ကိုမဆန်နှင့်အမျှကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကြောင့်မေး၏တပ်များအတွက်အသီးအသီးသင်၏အဖြစ်နှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး၊ကုန်ခုခံကာကွယ်ဆိုေထာက္ခံသူမ်ား၊လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်တစ်ခုလုံးကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်သောညှဉ်းဆဲဖျက်ဆီးအပေါ်ဤသည်ဆိုက်ကို။ အထူးသဖြင့်အဖော်ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့အကောင့်အတုတပ်ဆင်ထားနှင့်အတူသူတို့၏အမည်နှင့်ရုပ်ပုံနှင့်အသုံးပြုခဲ့အတွက်စည်းလိင်မြင်ကွင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အသုံးပြုသူအတွက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အခွင့်အရေး။ မည်သူမဆိုယူချင်စိတ်အပိုင်းနှင့်ဆန္ဒရှိဒီလိုကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတင်ထားနိုင်သူ၏မှတ်ချက်အောက်တွင်အဆိုပါပို့စ်မှပြသ အထောက်အပံ့နှင့်ပါဝင်သောအလုပ်အတွက်ဒီမှာအတွက်နည်းပညာသစ်။ အရာတစ်ခုခုကိုများအတွက်၊သင်အစောင့်အချက်အလက်များကိုအကြောင်းတရား။ အလုံးစုံတို့အဘို့ငါအပ်ပေးပြီသင်သည်လက်ျာအ ပေါ်ဤအကောင့်ကိုအလိုအတပ်မတော်၏စောင့်ကြည့်ရန်နှင့်ပိုမိုချဲ့ထွင်ရန်အခေါ်မှကြားဖြတ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရောင်ပြန်ဟပ်မန္ယူေနာက္ခံလူအ နှင့်ပြင်းထန်မှု၏အမျက်ဒေါသအတွက်တိုင်းနှလုံး၏အဖွဲ့ဝင်များသည်စစ်တပ်၏အကြောင်းသူတို့၏ညှဉ်းဆဲခြင်း၊ဖျက်ခြင်း၊ပြင်ဆင်မှု၊နှင့်အ အမှန်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြပွဲ၏အပူညွတ်မှု၏အသီးအသီးအဖွဲ့ဝင်အတွက်ရုန်းကန်။ အသစ်ပြည်သူ့တပ်မတော်။
အမြဲတမ်းနေထိုင်စပိန်အတွက်။ များရရှိရေးအတွက်အမြဲတမ်းနေထိုင်စပိန်။ ရပုံကိုအမြဲတမ်း။ ပညာရေးအတွက်ဥရောပ
စပိန်နိုင်ငံ၏အသက်အကြီးဆုံးနိုင်ငံများအတွက်ဥရောပကိုဆွဲဆောင်ရန်ရည်ရွယ်ထားပြောင်းရွှေ့သာသာလွန်သောပထဝီအနေအထား၊အပျော့စားရာသီဥတု၊တစ်ဦးကြွယ်ဝသောစည်းစိမ်နှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာအမွေအ။ အဆိုပါဆွေမျိုးနှင့်စီးပွားရေးတည်ငြိမ်ရေးကို၏အလယ်၌စပိန်၊ဥရောပ၊အလုံလုံလောက်မြင့်မားတဲ့စံနှုန်းလူနေမှု၏၊ကျယ်ပြန့်သောအခြေခံအဆောက်အဦများ၏အကျိုးစီးပွားအတွက်နိုင်ငံခြားရှာဖွေနေ၊သာဝယ်လူနေအိမ်ခြံမြေအတွက်အမိမြေအစေရ်၊ကာမဲန်နှင့်အပူတပြင်း ၊ဒါပေမယ့်လည်းရွှေ့ဖို့ဒီနေရာမှာအမြဲတမ်း။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများရရှိရေးအတွက်အမြဲတမ်းနေထိုင်ပိန္မသာ၊ဒါပေမယ့်ကိစ္စအများစုအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ စပိန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်အမြဲတမ်းနေထိုင်သည် ရယူနိုင်ပါသည်ပြီးနောက်အချို့သောအချိန်ပြီးနောက်အယာယီအားနေအိမ်သို့၊နှင့်၏ပိုင်ရှင်များအတွက်လိုင်စင်ခွင့်ယာယီအားနေအိမ်သို့အတွက်နိုင်ငံတော်လွယ်ကူသည်မဟုတ်။ အထံတော်၏ကိုယ်ပိုင်အိမ်ခြံမြေအတွက်နိုင်ငံတော်အချုပ်အတတ်ဖို့ရုရှားနိုင်ငံသားအခွင့်မှန်မှန်အနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်သောအားဖြင့်ကန့်သတ်ဖစ္သည္။ ေရုရှားနိုင်ငံသားအခွင့်အမြဲတမ်းနေအိမ်သို့အတွက်နယ်မြေပိန်၏နိုငျငံတျော၏အလွန်ခက်ခဲသည်၊အလုပ်အများ၏ရှေ့မှောက်တွင်ဆယ်နှစ်တာကာလ၏နေအိမ်သို့အတွက်နိုင်ငံနှင့်အငြင်းဆန်၏ယခင်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကြောင့်၊ရုရှားနိုင်ငံမင့္သည္တစ်စာချုပ်နှင့်အတူစပိန်သို့မဟုတ်အသေကဒ္ႏ။ ပါကနိုင်ငံသားရုရှား၏အဘယ်သူမျှမအစီအစဉ်ကိုစွန့်ခွာဖို့ဆက်ဆံရေးသာသူတို့၏အမိမြေ၊ရှိရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အောင်မြင်ရန်အလွန်မှအပေါ်စီးတစ်မဟုတ်ဘဲ ။ မမွတ္မိဆာင္တာမ်ားနိုင်ငံသားအဖြစ်စပိန်ခွင့်ပြုသည်၎င်း၏နိုင်ငံသားများအရလက်တင်အမေရိကနိုင်ငံများ၊အရာဟောင်းအနီအပိန္။ ထို့အပြင်၊အစိုးရကအားပေးအားမြှောက်မည်အနှောအရဆာင္တာမ်ား၊သတ္ျဖတ္မႈေတြအလိုလိုအခြေချရန်အတွက်လက်တင်အမေရိက။ အရေအတွက်နိုင်ငံ၊နိုင်ငံသားအဖြစ်ပေးသောအညာဆည်းပူးဖို့အမြဲတမ်းနေအိမ်သို့အတွက်နိုင်ငံတော်အချုပ်အဖြစ်ဘိုလီးဗီးယား၊ဂွာတီမာလာ၊ဟွန်ဒူးရပ်၊တရုတ်၊ကျူးဘား၊အာဂ်င္တီးနား၊ပီရူး၊ချီလီ၊ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံနှင့်ပင်ဦး။ ရပိုင်ခွင့်ပြောင်းရွှေ့ဖို့အဲဒီနိုင်ငံကိုလျော့နည်းစေ၏ကြာချိန်နောက်ဆက်တွဲ၏ဝယ်ယူရရှိမှုသည်စပိန်နိုင်ငံသားအတွက်နှစ်နှစ်နှင့်မငြင်းလိုပါ၏တည်ရှိတဲ့ဒုတိယနိုင်ငံသားအဖြစ်အခြားတိုင်းပြည်များတွင်။ တဦးတည်း၏ထိရောက်သောနည်းလမ်းများအရအမြဲတမ်းနေအိမ်သို့စပိန်အတွက်ဆွဲဆောင်မှုမှနိုင်ငံခြားနိုင်ငံသားဟာမှတ်ပုံတင်ရန်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း။ ဒါပေမယ့်အများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းပြည်မဟုတ်ပါဘူး ခိုင်ခိုင်လုံလုံရရှိရေးသည်တစ်ဦးနေအိမ်သို့ပါမစ်သည်အထိ၊အဆိုပါကုမ္ပဏီတည်ထောင်ဖို့အစပြုလည်ပတ်ပေးဆောင်။ ကြောင်း၊အကယ်စပိန်အတွက်အခြေခံအိမ်စီးပွားရေး၊ဝင်ငွေဆောင်ခဲ့သို့ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အကျိုးတိုင်းပြည်၏စီးပွားရေးအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကြီးမားသောဘဏ္ဍာရေးဝင်ငွေ၊အဆိုပါပိုင်ရှင်လက်ခံရရှိဖို့မျှော်လင့်နိုင်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ၊ပေးမည်ညာဘက်အမြဲတမ်းနေအိမ်သို့။ အပိုင်ရှင်၏တစ်ဦးနေအိမ်သို့ပါမစ်အတွက်နိုင်ငံတော်၏စပိန်အမည်၊ရင်းမှတ်ပုံတင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုလျှင်၊လျှောက်ထားလက်မှတ်ရေးထိုးစာချုပ်တစ်နှစ်သို့မဟုတ်သူ၏ပိုင်ရှင်၏ပုဂ္ဂလိကအဆင့်အတန်းကုန်ပြီးပေးဆောင်မည်အခေါင်အခွန်။ အခြေခံအကျဆုံး၊ခက်ခဲတဲ့လမ်းဖြစ်လာမှပိုင်ရှင်မှပြောင်းရွှေ့စပိန်-ပြန်လည်ဆုံတွေ့ခံရဖို့အတူမိသားစုဝင်များ၊နေအိမ်တိုင်းပြည်အတွက်။ ေရုရှားနိုင်ငံသားများ၊ဆွေမျိုးသားချင်းများတှငျနထေိုငျသောသူစပိန်နှင့်၎င်း၏နေထိုင်သူများ၊ပြဿနာများ ရတဲ့အနေအိမ်သို့ပါမစ်မတည်ရှိပါဘူး။ အခြေခံပြဿနာရဲ့အရယူ၏အမြဲတမ်းနေအိမ်သို့အတွက်နိုင်ငံတော်အပိန္-အကျော်လွှား၏ပထမဦးဆုံး'လှေ'အဆင့်၊နေအိမ်သို့ပါမစ်။ တစ်ဦးထပ်မံအဘို့တိုးချဲ့မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏အဖြစ်ခက်ခဲပြီးအချိန်-စားသုံး။ ဒါပေမယ့်လှုံ့ဆျောနိုင်ငံသားရုရှား၏၊တစ်ပါးရလဒ်များကိုမှတပါး၊အများအတွက်နိုင်ငံသားအဖြစ်နေထိုင်နိုင်ပါ၏ပိုင်နက်ထဲမှာအတြက္အနှစ်၊နိုင်လိမ့်မည်လွတ်လပ်လပ်ရွှေ့ဖို့အတွက်အီးယူနိုင်ငံများ၊အကျိုးကျေးဇူးများကိုလက်ခံရရှိဒေသခံနေထိုင်သူများအတွက်အပေါင်ခံချေးငွေထုတ်ချေး၊စသည်တို့ကို။ လိုလျှင်အစဉ်နောက်ဆုံးခခ်စပိန်မှအနက်အဓိပ္ပာယ်၊အရာတစ်ခုခုအဘို့စစ်တိုက်ခြင်းမှ။
အ ဂွါယူမှကျူးလွန်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဆီလျော်အဆင့်ဆင့်ကိုသေချာစေရန်အသားရှိသည်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုအောင်မြင်စွာပြည့်စုံသူတို့၏အစီအစဉ်။ အထွေထွေအတွက်ဤမူဘောင်များ၊ကျောင်းသားအားလုံးတန်းတူစဉ်းစားနှင့်ညီမျှ။ ကျောင်းသားတွေထောက်ပံ့ကြဘူး၏ပန်းတိုင် ပညာနှင့်ကျင့်ဝတ်အ များအတွက်မိမိတို့ကိုယ်နှင့်၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ကျောင်းသားကျောင်းသူများမည်ဖြစ်ရာပြစ်ဒဏ်များ၊အပါအထုတ်။ အထွေထွေအတွက်၊ကြိုးပမ်းမှုများ ဖြေရှင်းရန်အခြေအနေမျိုးမရှိဘဲထုတ်။ အလင့်များပါသည့်ကြောင်းသတိပေးခြင်း၊ရေးသားသတိပေးဆိုင်းမည်ညွှန်းအဆုံးနှင့်အများဆုံးအလေးအနက်အရေးယူ။ အခါ ယုံကြည်သောသမာဓိကို၊လုံခြုံရေးသို့မဟုတ်ကောင်းစွာဖြစ်ခြင်း၏၎င်းကျောင်းသားများ၊ဝန်ထမ်း၊ဖောက်သည်သို့မဟုတ်အခြားဧည့်အန္တရာယ်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်၊အထုတ်လိမ့်မည်ထုတ္ျပန္ခ်က္အတိကျောင်းများ၏မည်သည့်အချက်မှာလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်။ အဆိုပါဆပ်ရန်ပျက်ကွက်ရက်အကောင့်အသစ်များကြောင့် အတွင်းသတ်မှတ်ထားသောကာလအခြေခံအဘို့အစားသုံးမှု၏အဆေးခြောက်မခြံမြေအပေါ်အထက်တန်းကျောင်း၊ကျောင်းအတွက်ဖြစ်ရပ်များ၊လှုပ်ရှားမှုများသို့မဟုတ်ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်လေ့လာရေးကမည်သူမဆို၊အမထမ်းများသို့မဟုတ်ကျောင်းသားများ။ မည်သည့်အသေးအဖွဲအကြောင်း ကျောင်းသားတို့နှင့်၊အသုံးပြုခြင်း၊ရောင်း၊သို့မဟုတ်ရှယ်ယာများ၏ဥပဒေရေးရာ(ဥပမာ။ ဆေးခြောက်၊ဆေး၊စသည်တို့ကို။) သို့မဟုတ်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေး၊မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၊အရက်ဒါမှမဟုတ်ဆေးရွက်ကြီးမည်သည့်အချိန်တွင်မပေါ်နေစဉ်ကျောင်းအိမ်ခြံမြေ၊သို့မဟုတ်အောက်ကျောင်းအာဏာပိုင်၊အရာအများစုကိုအလေးအနက်စည်းကမ်းအရေးယူ၊အပါအဝင်ဆိုင်းသို့မဟုတ်ထုတ်။ ကျောင်းမူဝါဒအပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်လည်းသက်ဆိုင်သည်အားလုံးဆင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုများ၏။ ကျောင်းရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ရှာဆို၏ကျောင်းသားတစ်ဦးလျှင်ကျောင်းသားသင်္ကာရှိမူးယစ်ဆေးဝါးများသို့မဟုတ်တရားမဝင်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုမှကျောင်းနှင့်ခရီးသွားလာလှုပ်ရှားမှုများ။ ကျောင်းသားများဟုယုံကြည်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်နှင့်မူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်အရက်ရှိအလေးအနက်အကျိုးဆက်များအပါအဝင်ဆိုင်းသို့မဟုတ်ထုတ်။ က်ာင္းသားအားလံုးရန်လိုအပ်သည်နှင့်အညီလိုက်နာဆောင်မူများအ ။ လျှင်ပင်ဖောက်ရှိအလားအလာ ရလဒ်အတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးမှုလူသို့မဟုတ်ခံေျမ၊ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ် ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်သူလက်ခံရရှိခဲ့သည်ဆိုင်းများအားလိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ရှိပါတယ်ကတည်းကချိုးဖောက်မည်သည့်အမူအ ။ မပါ အယှက်သို့မဟုတ်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း၏မည်သည့်ကျောင်းသား၊ဝန်ထမ်းဝန်ထမ်း၊ဖောက်သည်သို့မဟုတ်ဧည့်သည်များအကျောင်း။ ကျောင်းသားများပါဝင်ခြင်းသောသူအများအတွက်အနှောင့်ယှက်သို့မဟုတ်ပြုမူသောအမှုဆင်ခြင်သောလူမျိုး၊လိင်၊ပြည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုမှဘာသာရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းမူတည်၏ပြင်းထန်မှုအပေါ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆိုင်းငံ့ထား။ ဆိုသူကျောင်းသားများစဉ်းစားတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအပေါ်အာရုံစိုက်အလေးအနက်နှောင့်ယှက်သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်မှုရှိကြောင်းခွဲခြားနိုင်အပယ်ခံရအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်များ၏ကျောင်းပေါ်မူတည်ပြီး၊ထိုလှုပ်ရှားမှု၏။ အဖြတ်အတွက်အဘယ်သို့ပြဌာန်းနှောင့်ယှက်သို့မဟုတ်ခွဲခြား၊အ ကိုရည်ညွှန်းသည်ညာဉ်၏အကွီးဗက်လူ့အခွင့်အရေးနှင့်လွတ်လပ်မှု။ အသား လည်းပျက်၊ခိုးယူသို့မဟုတ်အခြားအလွဲသုံးစားလုပ်၏ကျောင်းစေခြင်းငှါပယ်ခံရနှင့်အ မှကျူးလွန်တာဖြစ်ပါတယ်လံုးကျောင်းဝန်ထမ်းများ၊ကျောင်းသားများ၊ဖောက်သည်များနှင့်ဧည့်သည်များဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်။ သူကျောင်းသားများအားအရေးယူစျြလြူရှုသို့မဟုတ်မည်သည့်လမ်းအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေဘေးကင်းလုံခြုံမှု၏ကိုယ်ကိုသို့မဟုတ်အခြားသူများကိုဖယ်ရှားပါလိမ့်မည်။ ကျောင်းသားတွေကိုဘာသာရပ်အားထုတ်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်သည့်အကြောင်းကြားလိမ့်မည်အရေးအသား၌ဖြစ်စေ၊အီးမေးလ်ဖြင့်၊စာပေးလက်ဖြင့်သို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်ထား။ အ များအတွက်ထိုက်သည်မဟုတ်မ-ပေးအပ်ခြင်း၏မှတ်ပုံတင်အၾကိဳက္ဆံုးလျှင်ကျောင်းသားထောက်ပံ့ပေးမထားပါဘူးတရားဝင်လူနေအိမ်လိပ်စာ။ အမိန့်ကြော်ငြာစာများမဆံ့လိမ့်မည်၊တစ်ဖေါ်ပြချက်၏အခြေခံအဘို့အထုတ်နှင့်ထိရောက်သောနေ့စွဲ။ အဆိုပါသွန်းသောကျောင်းသားအ အပေါ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ပစ်ရမယ်၊အယူခံဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသုံးရက်အတွင်းမှအမိန့်ကြော်ငြာစာပြီးနောက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏တိုင်ကြားချက်အ မှပေးကျောင်းသားနှင့်ပေးလုံလောက်သောသက်သေအထောက်အပံ့ဆိုပါတယ္။ အသူကျောင်းသားများအယူခံနှင့်အောင်မြင်တဲ့စဉ်းစားနေကြတယ်မှဆုတ်ခွာ ။ အစီအစဉ်၏အကောင့်အသစ်များ၏အက်ာင္းသား၊ေနေသောကျောင်းသားများကိုမပယ်၊စီးလိမ့်မည်အောက်တွင်အမ်းငွေပေါ်လစီကျောင်း၊အတူထိရောက်သောနေ့စွဲထုတ်အဖြစ်နောက်ဆုံးနေ့များတက်ရောက်သာသူတို့ရဲ့အစီအစဉ်လေ့လာမှု၏။ ကျောင်းသားတစ်ဦးအကြောင်းအလုံအတွက်တာဝန်ရှိသည်ပြန်လာ၏မည်သည့်အထက်တန်းကျောင်းတွင်မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်အမွေမြေအတွင်းဆယ်ရက်၏အသက္ရွင္သန္ေနှင့်ကျင်းပသည့်ဘဏ္ဍာရေးအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဆိုခံေျမမပြန်လာ၌ကောင်းသောအခြေအနေ။
အရှေ့တောင်အာရှည့္မယ္('ပြီး'အတိုင်း၊အမှုမည်)ဉာဏပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈကိုအခြားသူများရဲ့၊ကျနော်တို့အမေးကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများအတူတူလုပ်ဖို့။ ပါကကျေးဇူးပြုပြီးသတင်းအချက်အလက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်မည်သူမဆိုများအတွက်၊ဒါပေမယ့် မဟုတ်သေချာပေါက်ကိုဝင်ရောက်ဖို့၊ဒေါင်းလုပ်၊ပုံနှိပ်ခြင်း၊မိတ္တူနှင့်သို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်း။ မူပိုင်အခွင့်မူဝါဒ('မူဝါဒ')စုံထုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏မူဝါဒများအပေါ်နှင့်ဆက်စပ်သောကိစ္စများအားမူပိုင်အဖြစ်စွပ်စွဲချက်များဖောက်ပစ္စည်း တင္ထားသည္သို့မဟုတ်အလုပ်တွင်ရရှိနိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်လုပ်ရပ်တွေကိုဆန့်ကျင်ပြစ်မှုကျူးလွန်ပြန်လုပ်ပါ။ အချက်အလက်များအတွက်မူပိုင်ရှင်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အမည်နှင့်အတူလိုက်လျောအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများ။ အထူးသဖြင့်၊ငါတို့သည်နှင့်အတူလိုက်နာမှုအစကၤာမူပိုင်ခွင့်အက်ဥပဒေနှင့်မူပိုင်ခွင့်(ကွန်ယက်ဝန်ဆောင်မှုပေး)စည်းမျဉ်းအဖြစ်သက်ဆိုင်သော။ သင်ထင်လျှင်အသိဥာဏ္ပညာ(ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်မူပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်မဟုတ်ဒါကြောင့်အဘို့အမှန်သည် အသုံးပြုရန်စွမ်းဆောင်ရည်)ပါးပဲလုပ်နိုင်ကြောင်းကိုတဆင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုစံချိုးဖောက်မှု၏သတိပေးအွန်လိုင်းသို့မဟုတ်တစ်ဦးမိတ္တူကိုပေးပို့နှင့်အတူ ဖက္(ဒီနေရာမှာကိုဖိုင်စက္ကူ)ဖြည့်စွက်ပုံစံနဲ့ပေးပို့ပြီး:ပါကကျေးဇူးပြုသာလက်ခံနှင့်အပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်သတိပေးအင်္ဂလိပ်ဘာသာတွင်အကြောင်းအတူလိုက်လျောကၤာမူပိုင်ခွင့်အက်ဥပဒေ၊အခြားတည်ဆဲဥပဒေများနှင့်မူဝါဒများ(သင့်လျော်သောအဖြစ်)။ ဆိုသတိထားမိမလိုက်နာအပေါ်ကနှင့်အတူငြင်းပယ်မည်၊မယူဆိုအရေးယူနှင့်ပတ်သက်၍ငြင်းပယ်သတိပေး။ အပေါ်လက်ခံရရှိတိုင်ကြားချက်၏အမိန့်ကြော်ငြာစာ ၊အယူအပြုအမူဖာ္ျရှိမရှိအပေါ်မှာမူတည်ပြီးအစွပ်ချိုးဖောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့သို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအသုံးပြုမှုတစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကအုပ်ချုပ်သည်အဆိုပါမူပိုင်ခွင့်အက်ဥပဒေ၏ကၤာအဖြစ်သက်ဆိုင်သောကွန်ယက်ဝန်ဆောင်မှုပေး။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်ဥပဒေကြောင်းအရဌာနများအတွက်ရှင်းလင်းချက်အပေါ်မူဝါဒရေးသို့မဟုတ်ဖက်စ်ထက်၊သို့မဟုတ်သင်ဖုန်းခြောက်ဆယ်ငါးသို့မဟုတ်အီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့။ ချိုးဖောက်၏ မူပိုင်ခွင့်အချက်အလက်အသုံးပြုသူများအတွက်ကြသူအသုံးပြုသူများတင်ထားသို့မဟုတ်(အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ)မည်သည့်အကြောင်းအရာပေါ်တွင်သို့မဟုတ်တဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂုဏ်သတ္တိများသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုသင့်လိုက္မယ္သူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်အတူအထက်ပါခေါင်းစဉ်အောက်ရှိ'အချက်အလက်များအတွက်မူပိုင်ရှင်၏ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု'။ အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အများဖယ်ရှားသို့မဟုတ်ပိတ်ဖို့လက်လှမ်းမည်သည့်ပစ္စည်းနှင့်အညီအသိပေးစာ၏ချိုးဖောက်မာက္တုိင္းကိုချိုးဖောက်ရာအဆိုပါမူပိုင်ခွင့်အက်ဥပဒေ၊ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးေအဘီအမိန့်ကြော်ငြာစာအသုံးပြုသူမှကြားဖို့သူ့ကို၏ရှင်းလင်းဖယ်ရှားရေးနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအခြားအချက်အလက်(အပါအဝင်သတင်းအချက်အပေါ်ဘယ်လိုပေးပို့ဖို့အကိုက်အတည္ျပဳအသိေ)အဖြစ်အမည်အသုံးပြုသူမှအသုံးဝင်သည်။ ငါတို့သည်လည်း၊အမှုကိုငါတို့နှင့်အတူဝန်ဆောင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ(အပါအဝင်ဤမူဝါဒအရ)နှင့်သင့်လျော်သောအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောသမ္မာသတိ၊ ပိတ်ပြီးသို့မဟုတ်ပယ်ဖျက်(တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်လုံးဝ)အသိပေးခြင်းမရှိဘဲအကောင့်အသစ်များ၏အသုံးပြုသူများ၏မည်သူမည်ငြိစွန်းတွင်မူပိုင်အ ခြင့္အေရး(အဝင်၊ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်မမူပိုင်ခွင့်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအမှတ်)၏အခြားသူများ။ အထူးသဖြင့်၊ငါတို့သည်ရပ်ဆိုင်းလိမ့်မည်အကောင့်အသစ်များ၏ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူများအဘို့အဘယ်သူကိုကျနော်တို့တွေ့ရှိကြောင်းချိုးဖောက်ပြန်လုပ်ပါ။ 'ဝန်ဆောင်မှုအကောင့်အသုံးပြုသူအကောင့်အသုံးပြုသူအတွက်လေးစား၏တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ခြံမြေလုပ်ကိုင်သို့မဟုတ်ပေးငါတို့အားဖြင့်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားသောအသုံးပြုသူတစ်ပါးရဲ့မူပိုင်အခွင့်တစ်ဦးတတိယပါတီအတွက်သင်တန်းသူ-သူမ၏အသုံးပြုမှုကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကၤာလေလံခြံမြေဝန်ဆောင်မှုအကောင့်နိုင်ကြောင်းဆုံးဖြတ်သည်သူမ၏သူမ ကၤာလေလံအကောင့်ဖွင့်၊ဒါပေမယ့်မသူ-သူမ၏အခြားဝန်ဆောင်မှုအကောင့်များ(ဥပမာ အၾကိဳက္ဆံုး)။ အဖြတ်အတွက်ရှိမရှိ အသုံးပြုသူ၏ထပ်ချိုးဖောက်မှုနှင့်၊ကျနော်တို့ယေဘုယျအားဖြင့်ချမှတ်အောက်ပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်း(အဖြစ်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်သို့မဟုတ်ပြင်ဆင်မှအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောသမ္မာသတိ)
ဗဟိုဘဏ်၏အလံဗဟိုဘဏ်၏အဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ။ စနစ်တကျဖွဲ့စည်းပြန် ၏ဘဏ်များအတွက်အသုံးဇူလိုင် ၁၉၉၃၊နှင့်အညီပြဋ္ဌာန်း ၁၉၈၇ ခခံဥပေဒဖိလစ်ပိုင်နှင့်အသစ်ဗဟိုဘဏ်အက်ဥပဒေ၁၉၉၃။ဆိပ္ျအ သုံးခုအတွက်ဇန်နဝါရီ ၁၉၄၉၊အဖြစ်ကိုင်တွယ်ဗဟိုလည်းရှိ၏။ ဖြစ်စဉ်းစားသည်အဆိုပါဘဏ်သည်ဘဏ်များ၏ဗဟိုဘဏ်အလံများကြောင့်မော်နီတာများအားလုံးဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်း။ အောက်ပါများမှာအဓိကအအခန်းကဏ္ဍ၏အ.
အဆိုအရအချို့သော၊ဟို ၊သူအသေခံခြင်းအားဖြင့်အ စပိန်၊ရှိသူရဲကောင်းဖြစ်လာသောကြောင့်သူ၏အရေးကိုဖျက်ဆီးဖို့စိတ်ကူးတို့၏နှင့်လွတ်မြောက်သောစိတ်ကိုကျနော်တို့ဖွဲ့စည်းရန်နိုင်ငံအ ၽြန္ုပ္ နှင့်က နှင့်သူ၏အက်ဆေးအပေါ်ႏ ကြောင်း၊စိတ်ပိုင်းဖြတ်ယုံကြည်ချက်ဖြစ်ကြောင်းကောင်းပါတယ်၊အထူးသဖြင့်လိုက်နာရန်ဆန္ဒကိုအ ကဲ့သို့အဘုရားသခင်၏။ ဒါပေမဲ့၊အချို့သောအချိန်မှီပစ်၊သူကစာရြက္စာတမ္းေျပာသူစိမ်းတစ်ဦးကက်သလစ်နှင့်အသစ္ကသူ့ကိုအပေါင်းတို့သည်သူ၏ကျမ်းစာဘုရားကျောင်းဆန့်ကျင်သည်။ ဖော်ထုတ်စာရွက်စာတမ်းအဖြစ် ၊"အ ။"သောကြောင့်သူ၏အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းမှအသင်းတော်၊အိမ်ထောင်သည် သူတို့၏ဂျိုးဇက် ၊သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချစ်။ အဆိုအရအချို့၊ဒါကြောင့်ပိုဖြစ်လာခဲ့သည်အကြီးအ အတွက်အသိအမှတ်ပြုသူ၏အမှားအယွင်းဆန့်ကျင်။ ဒါပေမယ့်လူများအဘို့မဟုတ်၊ယုံကြည်နောက်ဆုံးအချိန်လေးတွင်သူ၏အသက်တာ၏၊သူပြန်လည်ရုတ်ရေးထားသော၊သူ့ကို၎င်း၏သူရဲကောင်း။ များသောသူသည်လည်းစွန့်ပစ်သူ၏သတ္တိ။ ပင်အတွေ့အဆိုစာရွက်စာတမ်းများ၏ ၁၉၃၅ ခုနှစ်တွင်ဆက်လက်အပေါ်သံသယ။ အထူးသဖြင့်အဖြစ်ထူးခြားတဲ့မင္သက္ေသ၏အကောင့်အများအားဖြင့်ထက်ဝက်အဘ ။ ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဆီလျော် ရုတ်တရက်နိုးအကြိမ်ပေါင်းများစွာ၊လေးဆ၊အကြာ၊၊ နှင့် သည္။ ထူးဆန်းတဲ့အတွက်အချို့အပါအဝင်။ ငါသူတို့အားပညာရှင်များအကြောင်းမယုံကြည်ကြဘူး ။ နှင့်ငါ့အဘို့မဟုတ်၊အဆုံးသတ်ရေး"။"တသာ က၊ငါပြောလျှင် ရှိလိမ့်မည်နောက်ထပ်မစ္ဂ်စ္ဒ္တြင္အေညဉ့်နှင့်နံနက်ကြောင်းထေူနိုင်ပါသို့မဟုတ်စောင်းနင်းအ သို့မဟုတ်သက်သေများ၏ဖခင် ။ အတွက်စာရွက်စာတမ်းများအတွက်သူလျှိုစပိန်ဟုခေါ်ပြီးသားအစိုးရႏ အတွေ့အကြုံအစီရင်ခံကျမ်းစာ၌ရေးထား၏နေ့၏အသေခံ ရဲ့ ၊အထွန်းဖို့သူ့ကို၏အသားအစိုးရႏ၊ကိုယ်ရံတော်မှာဆဲလ်များ၏၊ထို့ကြောင့်၊တစ်ဦး"အပိုဆောင်းလွတ်လပ်သောမင္သက္ေ။"အရကြေညာချက်၊ ကြီးအခန်းကဏ္ဍအကြောင်းသူကြားသိသောအ ။ လည်းဖော်ပြခဲ့သောနှစ်ဘုန်း ရိုက်ထည့်ရန်အတွက်ထောင်ထဲကရဲ့ဖခင်ဟို နှင့်ဖခင် မတ်လ၊နှစ်ခုအခြားလူများ၊ စာအိပျဘယ်တော့မှမနှင့် ။ နှင့်ဆုတျဖွဲ၊ကမှတ်တမ်းတင် ၊အားလုံးနေသောဝင်အတွက်ဆဲလ်အကြောင်း၊ညဉ့်မဟုတ်၊တစ်ခါတစ်ရံမရှိရည်ညွှန်းနှင့်အတူလမ်းကိုရှာပါ ။ ဆိုလိုဘာမှမ ရှိပါတယ်၊အလယ်တန်းအရင်းအမြစ်သာသူ နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းသာ၏အဘ နှင့်ဖခင်မှမတ်လတည်ဆောက်သူ၏သက်သေခံချက်။ ငါကြီးမားတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိကွောငျးကိုအဘယ်သူမျှမအကြောင်းပြချက်မှမုရန်အစောင့်သို့မဟုတ်အ အထူးသဖြင့်သူတို့အလုပ်အတွက်အတိအကျသောအချိန်။ မကြာသေးမီက၊တစ်ဦးမိတ္တူ"လ ႏ"ကျမ်းစာအားဖြင့်တည်းဖြတ်ခြင်း လက်ဝဲမှညွှန်ကြားရေးမှူး၏အမျိုးသားပြတိုက်၏အလံ၊ဂျယ်ကျီ။ ဤသည်အလွန်အမိတ္တူပေး တူဂျိုးဇက် အတွက်သူ၏နောက်ဆုံးဒီနေရာမှာသွားရောက်ကြည့်ရှုနေ့၌သူ၏အသေခံ။ သူကရေးသားခဲ့သည်၊"ငါ့အချစ်နှင့်အပျော်မယား၊ဂျိုးဇက်၊ဒီဇင္ဘာ ၃၀၊၁၈၉၆၊ဟို ။"မှလွဲသူ"ဇ"သို့မဟုတ်လးမ်ား၊ဂျိုးဇက်၊နိုင် ၏တရားဝင်ရပ်တည်မှုအတွက်ကသူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေး၊အလွန်စာအုပ်ကိုနောက်ဆုံးအမျိုးသမီးသူချစ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ကန်းအလမ်းကိုခရစ်တော်၏။ သူကွယ်လွန်ပြီးနောက်ခရစ်ယာန်တစ်ဦး။ လက်ဝါးကပ်တိုင်အမှတ်သင်္ကေတ။ ငါ့ကိုသတိပေးဇာတ္ေ။ ဖိလစ်ပိုင်ပုံမှန်အတွက်တက္ကသိုလ်အနှစ်ကျမ်းစာ၏ မီသေဆုံးသူ၏မိန့်မြွက်ဒီအမှတ်အသား။ မိမိအပြီးသတ်ဖို့ညွှန်ကြားချက်ကိုမိသားစုကိုလက်ခံရရှိကြပြီမဟုတ်သည့်တိုင် ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင်(အက္ခရာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အစိတ်အပိုင်းများလှူဒါန်းမှု၏စပိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအယ်လ် က်ာ္လြန္ရ အတွက်ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရ):"ငါ့ကိုသင်္ဂြိုဟ်မြေ၌။ စစ္ေသင်၏အကြောနှင့်အဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ငါ့နာမကို၊အရက်နှင့်သေမင်း၏။ အဘယ်သူမျှမအခြား။ လျှင်သင်သို့ဖြစ်ချင်ခြံငါ၏သင်္ချိုင်း၊သင်ယူ။ အဘယ်သူမျှမကပို။ကောင်း၏လျှင်အခြေတောင်။ရု၊ဂျိုးဇက်။"သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးကဗျာတစ်ပုဒ်၊ဖော်ပြခဲ့တဲ့လည်းပါဝင်၏နာမတော်ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်မိမိသင်္ချိုင်းတွင်းနှစ်ကြိမ်။ မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်၊ လိုလားအားပေးတဲ့ခရစ်ယာန်သင်္ချိုင်း၊၊သေဆုံးခရစ်ယာန်တစ်ဦးကက်သလစ်။ ဒါကြောင့်အလှည့်တွင်အလင်းဆောင်ခြင်းအားဖြင့်အသစ်သောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အသစ်ကိုအနက်၊ထို့ကြောင့်ဟို စခဲ့တယ္။ နိုင်မှန်အ ။ ဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်သူရေးထားသောစာရွက်စာတမ်း။ ဒါပေမယ့်တကယ်ဆိုရင်စစ်မှန်တဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အပြောင်းအလဲအကတိကဝတ်နှင့်အောင်မြင်မှုများအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏သူ့ဘဝ၏သစ္စာနှင့်ဝီကီ၏စက္ကူခဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးနေ့၌သူ၏အသေခံ။.
ဖမ်းသုံးရောင်းစွပ်ဆိပ္သိုကျည်အတွက် စစ်ဆင်ရေးအတွက် မြို့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ည။ သူတို့ထံမှအခန့်မှန်းခြေ၏တန်ဖိုးရှိ ၉၀၊၀၀၀၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများ၏မီးရှူးနှင့်အလင်းပေးခြင်း။ အရသိရသည်။ သင္လဲအ မြို့ရဲတပ်ဖွဲ့ခရိုင်-ဒေသအထူးစစ်ဆင်ရေးယူနစ်၊ သူတို့ စစ်ဆင်ရေးပြီးနောက်ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရောင်းမည်ကျည်အင်တာနက်ပေါ်မှာ။ ဒီနေရာမှာသူတို့ရှာသောအခွင့်အာဏာ၏အရည်အချင်းစာရွက်စာတမ်းများကဲ့သို့လိုင်စင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမပြသ၏သံသယဒါကြောင့်သူတို့အဖမ်း။
အပန်းဖြေ၊တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီးအရှေ့အာရှတိုက်၊အမှတ်ထင်ပေါ်လာမယ့်ဒီမှာအားလပ်ရက်အပေါ်၊အထူးသဖြင့်သိသာမြို့၏ကမ်းရိုးတန်းတွင်ဖိလစ်ပိုင်၊ ရှင်၊အဆင်သင့်ပေး ဧည့်အတူနေဖို့အတွက်အပြည့်အဝ။ ပြုထားပြီးနောက်အချိန်နှင့်အရေအတွက်ကိုတိုးပွါး၏မေးမြန်းချက်များအပေါ်ခေါင်းစဉ်:'ရရန်မည်သို့နိုင်ငံသားကိုဖိလစ်ပိုင်'။ အဖြေကရိုးရိုးလေးပါ:သင်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်သင့်နှင့်အတူဥပဒေရေးရာမူဘောင်၏အာရှပြည်နယ်၊တယန္တရားများ၊အများဆုံးဖွယ်ရှိ၊ဤ ။ ပြီးသွားမှနတ်ပြည်နေရာအတွက်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်။ ဤဆောင်းပါး၌ကြကုန်အံ့၊ပထမဦးဆုံး၊ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်နိုင်ငံအလိုက်အလံများ၊အခြားစံချိန်စံညွှန်းများကိုဥပဒေပြုမူသောအမှု၊အုပ်ချုပ်လက်ခံ ၊ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၊အရှုံး။ အဓိကတရားဥပေဒ၏သမၼတခါကအစိုးရ၊အမွေးအောက်တိုဘာလအတွက် ၁၉၆၈ နှစ်၊ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင်အတည်ပြု။ ယခုအချိန်တွင်ထံမှအမွေးအလဲအတွက်အများအပြားစာရွက်စာတမ်းများဖော်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်၊'အစိုးရ ၁၉၈၇။ ဆက်စပ်ၥကိုေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္၏။ ဆောင်းပါးတ သတ်မှတ်မျိုးအစားများ၏ပုဂ္ဂိုလ်များ၊နိုင်ငံသားကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ။ နားလည်ပါတယ်၊သောစာရင်းကိုအောက်ပါလူများကိုတင်:လူ၊အဘယ်သူသည်မိမိကိုယ်ကိုဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့မိဘတွေနိုင်ငံသားများ၏ပြည်နယ်ကလေးမွေးဖွားအပေါ်ခုနစ်ဇန်နဝါရီ ၁၉၇၃ နှစ်ကအမေဖိလစ်ပိုင်၊အခြေအနေ၊ကြေငြာသောဤအသက်အရွယ်ကြွလာအားလုံးအင္ငံျခားသားမ်ား၊နိုင်ငံသားဥပဒေ(နှင့်အညီအပိုဒ်လေးပိုဒ် ၁)။ နောက်ဆုံးအချက်သည်အခြေအနေများနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုပေးဖို့မျှော်လင့်အားလုံး၏ခေတ်သစ်နိုင်ငံရေးအရအဆိုပါဆႏၵလက္မွတ္။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏၁၉၈၇ နှစ်၊အောက်ပါနည်းလမ်းတွေကိုရှာမှီး၏နိုင်ငံသားအဖြစ်:အဆိုပါမူရင်း ။ ဤကိစ်စတှငျ၊ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောအလေ့အကျင့်အတွက်နိုင်ငံအများအပြားပေးအပ်ခြင်း၊နိုင်ငံသားအားဖြင့်ဘွား၏ပိုင်နက်အပေါ်။ ထို့အပြင်၊ထိုလူငယ်များမှာဤပြည်နယ်မှာ၊သူ၏မိဘများနိုင်ငံသားများ ဖိလစ်ပိုင်။ ရကူးလက်မှတ်များတောင်အာရှနိုင်ငံများမှတဆင့် နှင့်အတူလိုက်နာရမယ်၏အရေအခြေအနေ:အမြဲတမ်းနေအိမ်သို့အဘို့အဆယ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်ပိုပြီးသရုပ်ပွားရေးရရှိမှုအမြဲတမ်းအိမ္ရာ၏အသိပညာဘာသာစကားဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်အကြောင်းအသိပညာသမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာ၊အခွန်လိုက်နာမှုအတွက်နိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ဥပဒေကိုလေးစား။ တွေ့မြင်အဖြစ်မှဤစာရင်း၊အတိုင်းဖြစ်နိုင်ပါ့၊သူတို့မဟုတ်အများဆုံးတင်းကြပ်သောလောကအတွက်၊ဒါပေမယ့်မအညွှန်း၊ပြည်နယ်အရန်ကြိုးစားနေသည်ကာကွယ်ပေးကိုယ်တိုင်ကမှကျူးကျော်အဆောက်အနေဖြင့်တတိယကမ္ဘာနိုင်ငံအဖြစ်စိုးရိမ်၏ယိုယွင်းပျက်စီးစီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံရေးအခြေအနေ။ ဒေသခံရှေ့နေကိုပြောဆိုချက်ကို၊အကြောင်းအောက်ပါပြဋ္ဌာန်းကျရှားပါးပါတယ်၊ဒါကြောင့်-ဟုခေါ်တမ်းများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုးစုမှငါးဆယ်တစ်နှစ်လျှင်။ ဒီတော့လျှင်၊တပါးအမျိုးသားနေသောခဲကြုံတွေ့ နိုင်ငံသား၊သူ့အခွင့်အလမ်းကြီးပြင်း။ ဤအမှုကိုပြုသောဖြစ်ပါတယ်၊အဘယ်သူမျှမဘက်၌တယောက်၊ထိန်းသိမ်းထားဖို့အတော်လေးပါ့ဗ်ာ။ တစ်ပိုရိုးရှင်းပြီးလမ်းအဖြစ်ခံယူတွက်ဒီနိုင်ငံတွေဟာတစ်ထောင်ပြု၊မကြာခဏနှစ်သက်၏နည်းလမ်းအဟောင်းတွေကောင်လေးအငြိမ်းစားရွေးချယ်ခြင်း၊လူငယ်၊တော်တော် ။ နိုင်ငံသားအဖြစ်ဇနီးသည်သင်သာလက်ခံရန်၊ဒါပေမယ့်သာငါးနှစ်ကြာပြီးနောက်။ လူများအတွက်ကနေအနောက်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်ဒီနည်းလမ်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်၊ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ပင်စင်ခွင့်ပြုဆောက်လုပ်ဖို့လံုးခ်င္း၊ေျမကြက္နှင့်တိုက်ရိုက်အတော်လေးအငြိ။ မိန်းကလေးများလိုလက်ထပ်ဖို့အဖိလစ်ပိုင်၊တောင်မျက်နှာကိုထောက်ရယူ၏နိုင်ငံသားအဖြစ်၊အများကြီးလျော့နည်း။ အဆိုပါဥပေဒ၏အလံသတ်မှတ်ထား၊နှင့်အခြားနည်းလမ်းများအရနိုင်ငံသားအဖြစ်၊ဒါကြောင့်ကောင်းစွာလူသိများသည်၊အနှံ့ကိုအသုံးပြု။ ပထမလမ်းဖြစ်ပါတယ် ငျ၊ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်အသိအမှတ်ပြု၏ကျွမ်းကျင်မှု၌ကဤသို့မဟုတ်ပညာအတတ်ပညာ၊သိပ္ပံ၊ယဉ်ကျေးမှု၊လွတ်လပ်ပြီးအတွက်စိတ်ဝင်စားအဆိုပါတယ္။ ဒုတိယနည်းလမ်း-စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့(အကြီး)ကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ။ အဖြစ်၏အလေ့အကျင့်အများအပြားနိုင်ငံများ၊ကမ္ဘာ့အပေါ်ဥပဒေပါနိုင်ငံသားများနှင့်အတူဖိလစ်ပိုင်အပြဋ္ဌာန်းချက်များ၊အကြောင်း၏ဆုံးရှုံးမှု။ ၏နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်ဝေနှင့်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်:မိမိဆန္ဒအလျောက်စပ်။ အဆိုအားပထမဦးဆုံးအပိုဒ်တွင်နိုင်ငံသားများ၏အစိုးရအားဖြင့်စာနှင့်ဆွဲယူအငြင်းဆန်၏နိုင်ငံသားအဖြစ်ဖိလစ်ပိုင်၊ကထောက်ပံ့စာရွက်စာတမ်းများ၊အတည်ပြုလက်ခံမှုအသစ်နိုင်ငံသား၊ဒါကြောင့်တစ်ဦးကိုကမ်းလှမ်းပြီးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။ ဤသည်နေ့ရက်ကာလ၌လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်အခြားနိုင်ငံများ၊အဆက်အသွယ်အိနၵိသို့မဟုတ်ရုံး။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊အဓမ္မအရှုံးုင္ငံအလံများလည်းဆက်စပ်ယူပြီးနှင့်အတူတစ်ဦးမြို့ပြနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်နိုင်ငံ၏နေအိမ်သို့။
ဆင်းရဲ၏အဓိကအကြောင်းရင်းကိုအတည်၏ချို့တဲ့၏ကလေးများအတွက်ဒီမှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ။ အဘယ်သူမျှမငွေအလုံအလောက်မဝယ်ယူအာဟာရအစားအစာများ။။။။။ ခက်ခဲသော်လည်း၊တစ်လမ်းမှကာကွယ်ရန်ချို့တဲ့ကလေးများ၏တစ်မိသားစု။ ဤလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ချို့တဲ့၏ကလေးများအတွက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ:စက်မှုနှင့်လိမ္မာပါးနပ်မိဘအလုပ်လုပ်ဒီတော့အထွက်တိုးပွါးလိမ့်မည်ကြောင်းအဆိုပါဝင်ငွေအပေါ်သုံးစွဲရန်အာဟာရအစားအစာနှင့်အစားအစာဖြည့်စွက်။ ရှင်းသန့်အ။။။။။ ထိုပိုးကောင်များဖြစ်လာကြ သားသမီးများ၏အတွက်တည်နေရာရတဲ့၏အစားအစာ။ ဆောင်လေးတွေ(၁ မှခြောက်နှစ်အရွယ်)တွင်ကျန်းမာရေးစင်တာတိုင်း'အာမခံခန်း'အလဧပြီလနှင့်အောက်တိုဘာလများအတွက်ပေးအခမဲ့အသံထွက်။ ခြောက်လမှနှစ်နှစ်အရွယ်၊အသံထွက်အတွက်အုပ်ချုပ်ခွင့်လကိုဇွန်လနှင့်ဇန်နဝါရီလအတွက်အားလုံးအများပိုင်ကျောင်းများ။
အခမဲ့ကျူရှင်နှင့်လစဉ်ထောက်ပံ့ကြေးကမ်းလှမ်းအစိုးရကဝန်ဆောင်မှုအာမခံစနစ်(သေခြင်း)သည်ကလေးငယ်များသို့မဟုတ်မှီခိုပြီး၎င်းတို့၏အဖွဲ့ဝင်များဖို့ရည်ရွယ်ထားသောသူအဖြစ်လျှောက်ထားတစ်စင်း။ ငါပေးအဆိုပါအေဂျင်စီမှဆပ်အကျူရှင်များနှင့်အထွေထွေအဖိုးအထိ ၄၀၊၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင်၊လစဉ်ထောက်ပံ့ကြေး ၃၊၀၀၀-လိမ့်မည်ဟုပညာရှင်။ တက်ကြွစွာနှင့်ပုံမှန်အဖွဲ့ဝင်သေခြင်းအစီအစဉ်ကိုလျှောက်ထားရန်လိုအပ်မည်ဝန်ခံဖို့အောက်ပါအချက်များကို:-အတူအမြဲတမ်းဝန်ထမ်းအဆင့်အတန်း-င့္အတန္းနှစ်ဆယ်လေးနေရာအတွက်ဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးနှစ်တက်- အယံပံ့ပိုးမှုများကိုခြောက်လအတွင်း။ ဝန်ခံလည်းကလေးငယ်များသို့မဟုတ်မှီခိုသူ၏အမြဲတမ်းစုစုပေါင်းသန်သောပြဿနာနှင့်ခြောက်ဆယ်နှစ်အရွယ်။။။။။ အပိုအခြေခံမူများ၊ကလေးသူငယ်သို့မဟုတ်မှီခိုအဝင်ပထမ၊ကျောင်းသားများ၏၄-၅-နှစ်သင်တန်းနှင့်လက်ခံရရှိကောလိပ်ကျောင်းသို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်ကအသိအမှတ်ပြုခြင်းအားဖြင့်အ ကော်မရှင်အပေါ်အဆင့်မြင့်ပညာရေး။ အ ပညာရှင်ဘွဲ့ရနှင့်အတူဖော်ထုတ်ရရှိလိမ့်မည်တစ်ဦးအပိုဆောင်းအကျိုးအနေဖြင့်။
স্থায়ী বসবাসের চেক প্রজাতন্ত্র. অভ্যর্থনা এবং নিবন্ধীকরণ স্থায়ী বসবাসের মধ্যে চেক প্রজাতন্ত্র. শিক্ষা ইউরোপ
© 2021 ရှေ့နေများအသင်း! ဖိလစ်ပိုင်ရှေ့နေ၊အားလုံးအွန်လိုင်း။